Asa – 2trondro
Home / Baiboly / Testamenta Taloha / Asa
1:1 Nisy lehilahy tany amin'ny tany Oza Joba atao hoe, ary izy dia tsotra sy manao ny marina ny olona, matahotra an'Andriamanitra sy ny nialany ny ratsy.
1:2 Ary efa teraka ho fito lahy sy telo vavy.
1:3 Ary ny fananany dia ondry aman'osy fito arivo, ary rameva telo arivo, miaraka amin'ny diman-jato tsiroaroa ny omby diman-jato izy-boriky, ary koa ny lehibe dia lehibe fianakaviana. Ary izany lehilahy izany dia be amin'ny olona rehetra 'ny vahoakan' ny atsinanana.
1:4 Ary ny zananilahy ny nandeha sy nanao fanasana amin'ny trano, samy anankiray teo amin'ny andro. ka naniraka, dia niantso ny anabaviny telo mirahavavy-mihinana sy misotro aminy.
1:5 Ary rehefa tapitra ny andro ny fanasana efa vita, Joba dia nampilaza taminy ka nohamasininy, ary, nifoha maraina, dia nanatitra sorona dorana ho an'ny tsirairay. Fa hoy izy:, "Angamba efa nanota ny zanako ka tsy nidera an'Andriamanitra tao am-pony." Dia nataon'i Joba ny andro rehetra.
1:6 Fa tamin'ny andro anankiray, raha ny zanak'Andriamanitra dia tonga mba hanatrika eo anatrehan'ny Tompo, Satana koa dia tonga teo aminy.
1:7 Hoy ny Tompo taminy, "Avy aiza ianao?"namaly, hoy izy:, "Efa nanodidina ny tany, ary nandeha manodidina eo aminy. "
1:8 Ary hoy Jehovah taminy, "Efa tsy nandinika mpanompoko, Asa? Fa tsy misy tahaka azy eny amin'ny tany, tsotra sy manao ny marina ny olona, matahotra an'Andriamanitra sy ny nialany ny ratsy. "
1:9 namaly azy, Satana nanao hoe:, "Ve Joba matahotra an'Andriamanitra ho tsy misy antony?
1:10 Efa tsy mimanda azy, ary koa ny an-tranony sy ny rehetra ny fananany manodidina azy, nitso-drano ny asan'ny tanany, ary ny fananany dia mihamaro amin'ny tany?
1:11 Fa hanitatra ny tananao kely, ka tendreo izay ananany rehetra, ary jereo raha mbola midera anao ny tavanao. "
1:12 Noho izany, hoy ny TOMPO tamin'i Satana, "Indro, izay ananany eo an-tananao, ihany aza hanitatra ny tananao hamely azy. "Ary Satana niala ny tavan'ny Tompo.
1:13 Noho izany, tamin'ny andro anankiray, rehefa ny zanany lahy sy ny zanakao-vavy dia nihinana sy nisotro divay, tao an-tranon'ny lahimatoa ireo rahalahy,
1:14 nisy iraka dia tonga teny Joba, izay nanao hoe:, "Ny omby niasa, ary ny boriky dia niraoka ahitra teo anilany,
1:15 ary ny Sabeana Nihazakazaka tany ka nitondra ny zava-drehetra, ary dia namely ny mpanompo tamin'ny sabatra; ary izaho irery ihany no evaded azy ireo hilaza aminao. "
1:16 Ary raha mbola niteny, hafa tonga, ka hoy Izy:, "Nisy afon'Andriamanitra latsaka avy tany an-danitra, ary, rehefa namely ny ondry sy ny mpanompo, izay mandevona azy; ary izaho irery ihany no afa-nandositra hilaza aminao. "
1:17 Ary raha mbola izy koa dia mbola niteny, hafa tonga, ka hoy Izy:, "Ny Kaldeana nikarakara telo fanafihana, ary nandroso tamin'ny ny rameva, dia nitondra azy; Ary tsy izany ihany fa, fa efa namely ny mpanompony tamin'ny sabatra; ary izaho irery ihany no nandositra hilaza aminao. "
1:18 Ary mbola niteny, ary indro, iray hafa niditra tao, ka hoy Izy:, "Ny zanakao-lahy sy ny zanakao-vavy dia nisotro sy nisotro divay tao an-tranon'ny lahimatoa ireo rahalahy,
1:19 rehefa tampoka rivotra mafy Nihazakazaka nivoaka avy tany amin'ny faritra an-efitra, ary nanozongozona ny zorony efatra amin'ny trano, izay nirodana ka torotoro ny zanakareo, ka maty izy rehetra; ary izaho irery ihany no afa-nandositra hilaza aminao. "
1:20 Dia nitsangana Joba ka nandriatra ny fitafiany, ary, dia nanaratra ny lohany, dia nianjera teo amin'ny tany, ka niankohoka,
1:21 ka hoy Izy:, "Nitanjaka no niala tany an-kibon'ineny, ary mitanjaka no hiverina. Ny Tompo dia nanome, ary ny Tompo no nanaisotra. Toy sitraky ny Tompo, izany no izany no natao. Isaorana anie ny anaran'i Jehovah. "
1:22 Tamin'izany rehetra izany dia, Joba dia tsy nanota tamin'ny molony, na no niteny na inona hisakana Andriamanitra adala.
2:1 Fa izany no nitranga fa, tamin'ny andro anankiray, nony avy ireo zanak'Andriamanitra efa tonga ka dia nijanona teo anatrehan'i Jehovah, Satana koa tonga teo aminy, Ary nitsangana teo amin'ny imasony.
2:2 Dia hoy Jehovah tamin'i Satana, "Avy aiza ianao?"namaly, hoy izy:, "Efa nanodidina ny tany, ary nandeha manodidina eo aminy. "
2:3 Dia hoy Jehovah tamin'i Satana, "Efa tsy nandinika mpanompoko, Asa, fa tsy misy tahaka azy eny amin'ny tany, tsotra sy manao ny marina ny olona, matahotra an'Andriamanitra sy ny nialany ny ratsy, ary mbola fihazonana ny tsy manan-tsiny? Kanefa Hianao efa nanesika Ahy hamongotra azy, mba tiako hampahory azy ho tsy misy antony. "
2:4 namaly azy, Satana nanao hoe:, "Hoditra fefin'ny hoditra; ary izay rehetra ananan'ny olona dia, dia homeny ho-fefin'ny ainy.
2:5 Kanefa mandefa ny tananao ka tendreo ny taolany sy ny nofony, ary avy eo dia ho hitanao na na tsy dia mitahy anao ny tavanao. "
2:6 Noho izany, hoy ny TOMPO tamin'i Satana, "Indro, dia eo an-tananao, fa dia toy izany koa, hitsitsy ny ainy. "
2:7 Ary noho izany, Satana niala ny tavan'ny Tompo dia namely an'i Joba tamin'ny tena lehibe fery avy amin'ny faladia rehetra ny lalana ho any an-tampon-dohany.
2:8 Dia naka shard ny tanimanga, ary norakofako ny fitsihany, raha nipetraka teo ny antontan-javatra ny miavosa.
2:9 Fa hoy ny vadiny taminy, "Moa ve ianao mbola manohy ao amin'ny fahatsoran'ny? Misaora an'Andriamanitra dia aoka ho faty. "
2:10 Ary hoy izy taminy, "Efa niteny tahaka ny anankiray amin'ny adala vady. Raha nanaiky zavatra tsara avy amin'ny tànan'Andriamanitra, nahoana isika no tokony tsy hanaiky ny zava-dratsy?"Tamin'izany rehetra izany dia, Joba dia tsy nanota tamin'ny molony.
2:11 Ary noho izany, telo lahy sakaizan'i Joba, nandre momba ny fahoriana rehetra izay nanjo azy, tonga, samy avy any amin'ny fonenany, Elifaza Themanite, sy Bildada Suhite, ary Zofara Namatita. Fa efa nanaiky ho avy miaraka mba hitsidika sy hampionona azy.
2:12 Ary rehefa nanangana ny masony teny lavidavitra eny, izy ireo tsy nahafantatra azy, ary, niantso mafy, samy nitomany izy mirahalahy, ary, nandrovitra ny fitafiany, dia niparitaka vovoka ambonin'ny lohany ny lanitra.
2:13 Dia nipetraka teo aminy tamin'ny tany ny fito andro sy fito alina, ary tsy nisy niteny ny teny taminy, satria hitany fa ny fanaintainan'ny lehibe indrindra.
3:1 Rehefa afaka izany,, Joba niloa-bava ka nanozona ny androny,
3:2 ary izany no zavatra nolazainy:
3:3 Enga anie ny andro ho very izay nahaterahako, ary ny alina, izay voalaza hoe:, "Ny lehilahy no torontoronina."
3:4 Enga anie izany andro izany ho aizina, Andriamanitra mba tsy hitady azy avy any ambony, ary mety tsy mazava manazava izany.
3:5 Aoka ny aizina sy ny aloky ny fahafatesana manamaizina ny fahitantsika azy, aoka hahatratra azy ny zavona, ary aoka izany ho rakotry sady nirehitra.
3:6 Aoka ny tafio-drivotra ny maizina hahazo izany alina, dia aoka tsy ho isaina ao amin'ny andron'ny taona, sady tsy hita isa eo amin'ny volana.
3:7 Enga anie izany alina izany ho irery sy tsy mendrika ny fiderana.
3:8 Enga anie izy ireo hanozona azy, izay manozona ny andro, izay vonona mamoha ny dragona.
3:9 Aoka ny kintana ho voafina sy ny haizina. Aoka miandry ny mazava, ary tsy hahita izany, na ny fiposahan'ny maraina ao amin'ny Atsinanana.
3:10 Fa tsy nanidy ny varavaran'ny ny kibo izay nitondra ahy, ary tsy hanaisotra ny fahoriana amin'ny masoko.
3:11 Nahoana aho no tsy maty ao am-bohoka? Nandao ny kibo, Nahoana aho no tsy avy hatrany ho faty?
3:12 Nahoana no voaraiko eo amin'ny lohalika? Nahoana no hampinono aho am-nono?
3:13 Fa ankehitriny,, Aho, dia ho efa matory mangina, ary ny fialan-tsasatra amin'ny torimaso aho
3:14 amin'ny mpanjaka sy ny consuls tany, izay manao ny tenany solitudes,
3:15 na amin'ny mpanapaka, izay manana volamena sady mameno volafotsy ny tranony,
3:16 na, toy ny miafina afa-jaza, Aho dia tsy ho foana, toy ireo izay, ho torontoronina, tsy nahita ny mazava.
3:17 Misy ny ratsy fanahy Mitsahara amin'ny fikomiana, ary any ny Sasatra noho hery haka sasatra.
3:18 Ary amin'ny fotoana toy izany, rehefa niara-nafatotra tsy misy fahasarotana, tsy nandre ny feon 'ny bailiff.
3:19 Samy any ny kely sy ny lehibe, Ary ny mpanompo dia afaka amin'ny tompony.
3:20 Nahoana no fahazavana no mba omena ny fadiranovana, ary fiainana ho an'izay ao nalahelo fanahy,
3:21 Izay miandry fahafatesana, ary tsy tonga, toy ireo izay mitady harena
3:22 ary izay mifaly indrindra raha mahita ny fasana,
3:23 Dia olona izay ny lalanao miafina sy izay efa manodidina amin'ny maizina?
3:24 Alohan'ny mihinana, I misento; ary toy ny firehetan'ny rano, dia toy izany tompokovavy Midradradradrà,
3:25 ny horohoro izay no natahorako no nitranga tamiko, ary toy izany koa no nanjo ahy ny tahotra.
3:26 No tsy mbola miafina? Moa tsy nangina aho? Moa tsy Tony foana aho? Kanefa fahatezerana no efa naharesy ahy.
4:1 Fa Elifaza Themanite, namaly, nanao hoe::
4:2 Raha manomboka hiteny aminao, angamba no haka azy-doza, fa iza no misalasala ny teny izy no niteraka?
4:3 Indro, efa mpianatra maro, ary efa nampahery reraka tanana.
4:4 Ny teninareo dia nanome toky ny miroa saina, ary efa mimanda ny tora-kovitra lohalika.
4:5 Fa ankehitriny ny loza efa naharesy anao, ary nihozongozona. Ary efa nanendry anao, ary hianao ka voahelingelin'ireo.
4:6 Aiza no fanehoana fanajana, ny herimpo, ny faharetana, ary ny fahalavorariana ny lalanao?
4:7 Diniho ity, Miangavy anao aho: iza moa no very tsy nanan-tsiny? Na raha manana ny olo-marina efa rava?
4:8 Raha ny tena izy, Aho fa tsy nahita ireo izay miasa heloka sy mamafy ny hatezerany, mijinja azy ireo,
4:9 ho faty noho ny fofonain'Andriamanitra no, ary ho levon'ny ny fahatezeran'ny ny fanahiny.
4:10 Ny feon'ny liona, ary ny feon 'ny liom-bavy, ary ny nifin'ny liona tanora no tonta lasa.
4:11 Very ny tigra satria tsy manana haza, ary ny liona tanora samy hafa nampielezana.
4:12 Koa, , dia nisy niteny tamiko tao amin'ny miafina, ary, toy ny hoe ny halatra, ny sofina nandray ny fitepon'ny fony ny ny mibitsibitsika.
4:13 Ao amin'ny horohoro amin'ny fahitana tamin'ny alina, raha olona efa zatra ho latsaka any an-torimaso lalina,
4:14 fahatahorana sy ny fangovitana nahazo ahy sy ny taolako rehetra dia tora-kovitra.
4:15 Ary raha nisy fanahy nandalo teo anatrehako, ny volo eo amin'ny vatana nitsangana.
4:16 Niseho sary eo anoloan'ny masoko, olona ny tavany izaho tsy nahalala, ary nandre feo aho, toy ny tsio-drivotra malefaka.
4:17 Tokony ho marina ny olona raha oharina amin'ny an'Andriamanitra, na dia ny olona madio noho ny Mpanao azy?
4:18 Indro, ireo izay manompo azy tsy miovaova, ary ny anjely dia mahita ny tsy fahalavorariana.
4:19 Mainka fa ireo izay miaina ao an-trano ny tanimanga, izay manana fototra eto an-tany, ho lany tahaka ny kalalao?
4:20 Avy maraina ny lalana rehetra ka hatramin'ny hariva, izy ireo dia hokapaina, ary satria tsy misy olona mahalala, dia ho ringana izy ireo, ka aza mitsahatra.
4:21 Fa ireo izay tavela dia halaina aminy; izy ireo ho faty, fa tsy amin'ny fahendrena.
5:1 Koa miantso, raha misy izay mamaly anao, dia hiverina ho iray na ny iray hafa ny olona masina.
5:2 Marina tokoa, fahatezerana manameloka ny adala ho faty, sy ny fialonana mamono ny madinika.
5:3 Efa nahita ny adala mafy faka, ary efa nanozona ny tsara tsy am-pihambahambana.
5:4 Ny zanany dia ho lavitra ny firoboroboana ary ho torotoro eo am-bavahady, ary tsy hisy izay afaka hamonjy azy ireo.
5:5 ny taom-pijinjana, ny mosarena dia hihinana. Ny olona efa voaomana hiady dia mampahory azy, ary ny mangetaheta hisotro ny loharanon-karena.
5:6 Na inona na inona eto an-tany mitranga tsy misy antony, ary ny alahelo tsy hitsangana eto an-tany.
5:7 Ny olona teraka ho amin'ny asa, ary ny vorona manidina.
5:8 Noho izany, noho io, Dia mangataka ny Tompo, ary hametraka ny fahaiza-miteny eo anatrehan'Andriamanitra.
5:9 Izy no lehibe sy tsy takatry ny saina sy zava-mahagaga tsy hita isa.
5:10 Izy no manome orana ny tarehin'ny tany sy ny irrigates ny zava-drehetra miaraka amin'ny rano.
5:11 Dia mametraka ny mpandefitra amin'ny avo, ary mamporisika ny alahelo manoloana ny fahasalamana.
5:12 Dia mampisinda ny hevitry ny spiteful, fandrao ny tànany ho afaka namita ny zavatra izay vao nataony.
5:13 Hafetsen'ny hendry ihany ny mitombo sy hiparitahan'ilay ny torohevitry ny meloka.
5:14 Ho hifanena maizina nony andro, ka hitsapatsapa amin'ny mitataovovonana tahaka ny amin'ny alina.
5:15 Taorian'izay, Izy no manao zavatra mba hamonjy ny malahelo tsy ho voan'ny sabatry ny vavany, ary ny mahantra tsy ho azon'ny tanan'ny mpanao an-keriny.
5:16 Ary hisy fanantenana ho an'ireo izay mila fanampiana, noho ny fahadisoany no hampihenanao ny teny.
5:17 Sambatra ny zanak'olombelona izay anarin'Andriamanitra,; noho izany, aza mandà ny famaizan'i Jehovah.
5:18 Fa ratra ary nanasitrana; dia mamely ary ny tànany ihany no manasitrana.
5:19 Izy no hamonjy anareo ho amin'ny fahoriana enina, ary amin'ny taona fahafito, ratsy dia tsy haninona anao.
5:20 Nandritra ny mosary, Izy no hanafaka anao amin'ny fahafatesana, ary nandritra ny ady, amin'ny tanan'ny ny sabatra.
5:21 Dia ho niafina ny loza hanjo ny lela, ary ianareo dia tsy hatahotra ny loza rehefa tonga.
5:22 Amin'ny fandravana sy ny mosary, hihomehy ianareo, ary ianareo dia tsy hatahotra ny biby eto an-tany.
5:23 Fa ianareo no mifanaraka amin'ny vato any amin'ny tany, ary ny biby ambonin'ny tany, dia hihavana aminao.
5:24 Ary ho fantatrareo fa manana ny an-trano soa aman-tsara, ary, momba ny fijery, dia tsy manota.
5:25 Toy izany koa, dia ho fantatrareo fa ny taranakao ho be sy ny taranany dia ho tahaka ny ahitra amin'ny tany.
5:26 Ho hiditra ny fasana amin'ny be dia be, toy ny vokatra ny vary dia nangonina amin'ny fotoany.
5:27 Indro, izany dia toy ny efa nahita azy, izay efa renareo; mandeha izany noho ny saina.
6:1 fa Joba, mamaly, nanao hoe::
6:2 Enga anie ka ny fahotako, fa izay mendrika fahatezerana, ary ny loza izay no iaretako, no nandanjana avy amin'ny mizana.
6:3 Raha oharina amin'ny ny fasika any amin'ny ranomasina, dia ho hita mavesatra, ary toy izany koa ny teniko dia feno alahelo.
6:4 Fa ny zana-tsipiky ny Tompo no ato amiko, ny fanahiko zava-pisotro ny fahatezerany, ary ny tahotra ny ny Tompo dia miaramila hamely ahy.
6:5 Ho Maneno va ny boriki-dia, raha eo amin'ny vilona? Na dia ny omby Bellow rehefa mitsangana eo anoloan'ny feno fihinanam-bilona?
6:6 Sa afaka iray mihinana sakafo Bland, izay tsy ho mamy sira? Sa misy olona afaka mba hanandrana izay, raha nanandrana, mahatonga ny fahafatesana?
6:7 Ny zavatra izay ny fanahiko dia vonona ny mikasika eo anatrehan'i, ankehitriny, noho ny tebiteby, no sakafo.
6:8 Iza no hanome izay angatahiko fa mba tonga sy Andriamanitra mba hanome amiko izay miandry,
6:9 ary izay, amin'ny voalohany, dia nanorotoro ahy, dia hovahana ny tànany ka nanapaka ahy?
6:10 Ary enga anie izany ho fampiononana, fa mampahory ahy alahelo, na dia mety tsy ho mandefitra amiko, Mbola tsy manohitra ny tenin'ny Iray Masina.
6:11 Fa inona no heriko, mba hanohy? Na inona no tanjona, ka mba hanao zavatra amim-paharetana?
6:12 Ny heriny dia tsy ny herin'ny vato, sady tsy ny nofoko vita amin'ny varahina.
6:13 Indro, tsy misy fanampiana ho ahy foana aho, ary ny olon-tiany ihany koa ny efa niala tamiko.
6:14 Izay manaisotra ny famindram-po amin'ny namany, mandao ny fahatahorana ny Tompo.
6:15 Ny rahalahiko efa niraharaha ahy, toy ny riaka izay mandalo haingana amin'ny lohasaha mideza.
6:16 Ireo izay matahotra fanala, oram-panala ho maika azy.
6:17 Tamin'izany fotoana izany, rehefa nampielezana, izy ireo dia ho levona, ary rehefa lasa mafana, dia ho afaka amin'ny fitoerany.
6:18 Ny lalan'ny ny diany Azon'ny tamberintany; handeha manaraka ny olom-poana sy ho levona.
6:19 Diniho ny lalan'ny Thema, ny lalan'i Saba, ary andraso vetivety foana.
6:20 Izy ireo natao tao an fikorontanana, araka izay efa nanantena aho; fa efa tonga atỳ amiko, ary efa manafotra-kenatra.
6:21 Ary amin'izany dia efa tonga, ary fotsiny ny hahita ny fahoriako, matahotra ianao.
6:22 Moa lazaiko: "Ento atỳ amiko, ary omeo ahy avy amin'ny ilaina?"
6:23 na, "Afaho aho tsy ho azon'ny tanan'ny fahavalo sy hanafaka ahy amin'ny tanan'ny mahery?"
6:24 Ampianaro aho, ary Izaho ho mangina, ary raha kisendrasendra no efa mahalala na inona na inona, nampianatra ahy ny raiko.
6:25 Nahoana no nihena ny tenin'ny fahamarinana, rehefa tsy misy eo aminareo izay mahay mba hanolotra porofo hamelezana ahy?
6:26 Manomana kabary ho be feo, ary manolotra teny ho any amin'ny rivotra.
6:27 Ianao havelany haka amin 'ny kamboty, ary miezaka ny hanimba ny namanao.
6:28 Izany no marina, ka hamita izay efa nanomboka. Mihainoa tsara, ary jereo raha mandainga aho.
6:29 mamaly, Miangavy anao aho, tsy misy fifandirana, ary, milaza ny marina, mitsara.
6:30 Ary dia tsy hahita heloka eo amin'ny lelako, na dia fahadalana hanakoako amin'ny tendany.
7:1 Ny fiainan'ny olona eto an-tany dia ny ady, ary Ny androny dia tahaka ny andron'ny mpikarama.
7:2 Toy ny mpanompo maniry alokaloka, ary toy ny mpikarama mijery fatratra ny faran'ny asany,
7:3 dia tahaka izany koa no nanana foana volana ary isaina ny mavesatra alina.
7:4 Raha mandry mba hatory, Izaho hanao hoe:, "Rahoviana no hitsangana?"Ary manaraka izaho kosa dia hanantena ny hariva, ary dia ho feno alahelo na dia mandra-haizina.
7:5 Ny nofoko mitafy poti ny fositra sy ny fahalotoana; ny hoditro Maina ary tightened.
7:6 Ny andro no nandalo haingana kokoa noho ny kofehy dia nanapaka ny mpanenona, ary dia efa levona tsy misy fanantenana.
7:7 Tsarovy fa rivotra ny aiko, ary ny masoko dia tsy hiverina hahita zavatra tsara.
7:8 Ary tsy ho eo imason'ny olona faly mijery ahy; ny mason'Andriamanitra dia mijery ahy, ary tsy haharitra.
7:9 Tahaka ny rahona misava ka mandalo, tahaka izany koa izay midina any amin'ny helo dia tsy hiakatra.
7:10 Izy tsy hiverina indray any an-tranony, na dia ny toerana mahalala azy intsony.
7:11 Ary noho izany, Dia tsy mba nakomboko ny vavako. Fa hiteny noho ny fahorian'ny fanahiko. Dia miresaka avy ny fangidian'ny fanahiko.
7:12 Aho ny ranomasina na ny trozona, fa efa nanodidina ahy tao am-ponja?
7:13 Raha hoy izaho:, "Ny fandriana no hampionona ahy, ary dia hahita fiadanana, niteny tao am-poko eo amin'ny bodofotsy,"
7:14 dia ho mampitahotra ahy amin'ny nofy, sy ny fitokonana hatahotra amin'ny tsindrimandry,
7:15 amin'izay mba, noho izany zavatra izany, ny fanahiko dia hisafidy mihantona, ary ny taolako, fahafatesana.
7:16 I mahakivy; tsy mety no hovelomina intsony ilehio. Iantrao aho, ny androko dia na inona na inona.
7:17 Inona ny olona, fa tokony hidera Azy? Na nahoana no mametraka ny fonao akaiky azy?
7:18 Mitsidika azy ianao maraina, ka maka fanahy azy tampoka.
7:19 Mandra-pahoviana no tsy hiantra ahy, na hanafaka ahy ingest ny rora?
7:20 Efa nanota; Inona no tokony hataoko ho anareo;, Ry mpiambina ny olona? Nahoana no nanendry ahy hamelezana anao, ka efa tonga enta-mavesatra na dia ny tenako?
7:21 Nahoana ianao no tsy mangalatra ny fahotako, ary nahoana no tsy haripakao ny helony? Indro, ankehitriny, dia matory ao amin'ny vovoka, ary raha hitady Ahy maraina, Tsy hijanona.
8:1 Fa Bildada Suhite, mamaly, nanao hoe::
8:2 Mandra-pahoviana no hiteny toy izany, ka ny teny aloaky ny vavanao dia toy ny rivotra miovaova?
8:3 Andriamanitra ve mamingana fitsarana, , na ny Tsitoha hamadika izay marina?
8:4 Ary ankehitriny, ny zanakao raha tsy efa nanota taminy, ary efa nalefany azy ho any amin'ny herin 'ny helony,
8:5 na izany aza, tokony hitsangana tany am-boalohany ho an'Andriamanitra, mba mangataka ny Tsitoha.
8:6 Raha manatona amin'ny fahadiovana sy ny manao ny marina, dia faingana hihaino tsara ho anao, ary ny fiainana am-pilaminana no handoa ny fahamarinanao,
8:7 loatra ka, raha ny zavatra taloha dia kely, ny farany ny zavatra ho hitomboany betsaka.
8:8 Fa anontanio ange ny taranaka voalohany, ary hanadihady tsara ny tantaran 'ny ray,
8:9 (mazava ho azy, isika, fa ny omaly sy ny tsy mahalala fa ny andro eto an-tany dia tahaka ny aloka,)
8:10 ary izy ireo no hampianatra anareo; dia hiteny aminao ka hanolotra anao ny fahaiza-miteny ny fony.
8:11 Afaka ny honahona fototra hiaina tsy misy hamandoana? Sa afaka sedges mitombo tsy misy rano?
8:12 Raha mbola ao amin'ny voninkazo, ary tsy hongotana amin'ny tanana, dia malazo alohan'ny hafa rehetra zavamaniry.
8:13 Vao Toy izany no iafaran'izay rehetra izay manadino an'Andriamanitra, ary ny fanantenan'ny mpihatsaravelatsihy ho levona.
8:14 Ny frenzy tsy hampifaly azy, ary ny finoany dia ho toy ny tranon-kala.
8:15 Izy no Miankina amin'ny tranony, ary izany dia tsy haharitra; dia hampijoro izany, nefa izany dia tsy hitsangana.
8:16 Toa manana hamandoana mbola maty ny masoandro tonga; ary amin'ny Sunrise, ny tsimoka mivoaka nitifitra.
8:17 Ny fakany ho vahoaka miara-mihoatra ny antontam-bato, ary eo amin'ny vato dia hitoetra.
8:18 Raha misy olona nihinana tsara afa-tsy izy, dia handà azy ka hanao hoe:: "Tsy fantatro ianao."
8:19 Fa izao no tombontsoan'ny ny lalany, fa ny hafa kosa dia mety haniry avy amin'ny tany.
8:20 Andriamanitra tsy hanary ny kely saina, na no manitatra ny tànany ho amin'ny spiteful,
8:21 na dia mandra-ny vavanao dia feno hehy sy ny molotrao amin'ny pifaliana.
8:22 Ary izay mankahala anareo, dia hitafy henatra, sy ny trano-lay ny ratsy fanahy dia tsy mbola.
9:1 ary Joba, mamaly, nanao hoe::
9:2 Marina tokoa, Fantatro fa izany no izy, ary izany olona tsy azo hamarinina ampitahaina amin'Andriamanitra.
9:3 Raha mifidy ny hifandahatra aminy, dia tsy afaka ny hamaly ny azy indray mandeha ao anatin'ny arivo in-.
9:4 Izy no fahazavan-tsaina am-po Izy sady matanjaka amin'ny hery; izay nanohitra azy, nefa nanana fiadanana?
9:5 Efa nifindra tendrombohitra, ary ireo izay nandrava ny fahatezerana tsy nahalala izany.
9:6 Ary mampihorohoro ny tany ho afaka amin'ny fitoerany sy ny andriny hangovitra.
9:7 Mandidy ny masoandro ka tsy hitsangana, ary efa nakimpiny ny kintana toy ny tombo-kase eo ambanin'ny.
9:8 Izy irery ihany no mamelatra ny lanitra, ary mandeha amin 'ny onjan-dranomasina.
9:9 Izy lamaody Arcturus, sy ny Telonohorefy, ary Hyades, ary ny afovoan-atsimo.
9:10 Tanterahany lehibe sy tsy takatry ny saina sy zava-mahagaga, izay tsy azo isaina.
9:11 Raha manatona ahy, Tsy hahita azy; raha miainga, Tsy hahatakatra.
9:12 Raha tokony hanontany izy tampoka, iza no hamaly azy? Ary iza no afaka milaza, "Nahoana ianao no manao izany?"
9:13 Andriamanitra, izay fahatezerany tsy misy afaka manohitra, ary teny ambanin'ny izay manenjana izay mitondra izao tontolo izao,
9:14 inona aho avy eo, dia ny hamaly azy sy fifanakalozana teny aminy?
9:15 Ary raha izao misy rariny, Tsy mamaly, fa mbola mangataka ny mpitsara.
9:16 Ary raha tokony hihaino aho, rehefa miantso aho, Tsy mino aho fa efa nihaino ny feoko.
9:17 Fa hanorotoro ahy amin'ny tafio-drivotra sy hanamaro ny fery, na dia tsy misy antony.
9:18 Tsy mamela ny fanahiko mba hiala sasatra, dia vokisany zava-mangidy.
9:19 Raha hery no nitady, izy no mahery indrindra; raha ny hitsiny amin'ny fitsarana, tsy misy olona no sahy manome fijoroana ho vavolombelona ho ahy.
9:20 Raha te-hanamarina ny tenako, ahy ihany ny vavako no hanameloka ahy; raha te haneho ny manan-tsiny, dia ho ratsy fitondran-tena manaporofo ahy.
9:21 Ary raha izao lasa tsotra, ny fanahiko ho fantatrareo dia izao, ary ny fiainako raha hampahasosotra ahy.
9:22 Misy zavatra iray izay efa nolazaiko: na ny tsy manan-tsiny sy ny ratsy fanahy izy mandevona.
9:23 Raha hamelezan'i, aoka izy mahafaty amin'ny indray mandeha, ary tsy mihomehy ny famaizana ny tsy manan-tsiny.
9:24 Koa satria ny tany efa voatolotra ho eo an-tànan'ny ratsy fanahy 'ny, dia Manarona ny tavan'ny mpitsara eo; fa raha izany dia tsy izy, dia iza moa izany?
9:25 Ny androko ho faingana noho ny iraka; izy ireo nandositra ka tsy nahita soa.
9:26 Efa nandalo toy ny sambo mitondra voankazo, tahaka ny voromahery manidina ny sakafo.
9:27 Raha hoy izaho:: "Tsy izany mihitsy no miteny izany." I hanova ny tavako ary izaho nampijaliana amin'ny alahelo.
9:28 Efa Natahotra ny asa rehetra, satria fantatrareo fa ianareo no tsy hamindranao fo ny ratsy.
9:29 Na izany aza, raha Izaho koa toy ny ratsy fanahy, nahoana no nisasatra foana?
9:30 Raha efa mandro amin'ny oram-panala, toy ny rano, ary ny tanana dia mamirapiratra toy ny madio zavatra,
9:31 nefa dia hanitrika ahy any am fahalotoana, ary ny fitafiany ny ho zava-betaveta aho.
9:32 Fa na dia tsy tiako tsy hamaly ny olona izay tahaka ny tenako, na izay mety ho ren'ny amiko koa amin'ny fitsarana.
9:33 Tsy misy izay afaka sady hanjaka eo amin'ny hevitra sy ny nametraka ny tànany teo anelanelan'ny roa.
9:34 Aoka izy hisotro ny tehiny hiala amiko, ary aoka tsy ny fahatahorana azy hampahatsiravina ahy.
9:35 Fa mbola hiteny aho ka tsy hatahotra Azy, fa tahotra ka izaho tsy afaka mamaly.
10:1 Reraka ny fanahiko amin'ny fiainako. Dia halefako ny teniny ny tenako. Fa hiteny noho ny fangidian'ny fanahiko.
10:2 Hoy izaho amin'Andriamanitra: Aza ho vonona ny hanameloka ahy. Hita ho ahy hoe nahoana ianao no mitsara ahy izao.
10:3 Ve sitraky ho anao, Raha tsiny ahy sy hampahory ahy, ny asan'ny tananao, ary manampy ny torohevitry ny ratsy fanahy?
10:4 Manana maso ara-batana? Na, toy ny olona mahita, Ho hitanao?
10:5 Ve ny andro toy ny andro ny olona, ary ny taonanao ho toy ny fotoam-olombelona,
10:6 mba ta-hanadina ny momba ny helony sy handinika ny fahotako?
10:7 Ary fantatrareo fa efa nanao na inona na inona ratsy fanahy, nefa tsy misy mahavonjy amin'ny tananao.
10:8 Ny tananao nanao ahy sy namboatra ahy manodidina, ary, amin'izao fomba izao, tampoka no manary ahy?
10:9 Tsarovy, Manontany anao aho, no dia namboatra ahy toy ny tanimanga, ary dia hampihena ahy ho vovoka.
10:10 Efa tsy nalaina ahy toy ny ronono, ary curdled ahy toy ny ronono?
10:11 Eny, notafianao hoditra sy nofo. Efa nametraka ahy niaraka tamin'ny taolana sy ny hozatra.
10:12 Efa voatendry ho ahy ny fiainana sy famindram-po, Ary ny fiahianao no niaro ny aiko.
10:13 Na dia mety manafina izany ao am-ponao, nefa fantatro fa mahatsiaro ny zava-drehetra.
10:14 Raha Efa nanota, ary efa namela ahy mandritra ny ora iray, nahoana ianareo no tsy miaritra aho mba ho madio tsy ho azon'ny fahotako?
10:15 Ary raha tokony ho ratsy fanahy, loza ho ahy, ary raha tokony ho marina, Dia tsy ho sahy miandrandra, rehefa vonton'ny amin'ny fahoriana sy ny fahantrana.
10:16 Ary noho ny avonavona, dia hisambotra Ahy toy ny liom-bavy, ary rehefa niverina, ianareo mampijaly ahy niavaka ambaratonga.
10:17 Mbola hanangana ny fijoroanao ho vavolombelona hamely ahy, ary hataoko maro ny fahatezerany ahy, ary ireo famaizana miady ato anatiko.
10:18 Nahoana no hitarika ahy avy tao an-kibo? Raha efa lany ritra aho, ka tsy mba nisy maso nahita ahy ho mandrakizay!
10:19 Aho, dia ho tonga toy ny raha tsy efa: Nafindra hatrany am-bohoka ho any am-pasana.
10:20 Dia tsy ny andro vitsivitsy ho vita tsy ho ela? hanafaka ahy, noho izany, ka dia mba hitomany ny alahelo kely,
10:21 alohan'ny hiala ary tsy hiverina intsony any amin'ny tany izay maizina sy rakotra ny zavona ny fahafatesana,
10:22 dia tany misy fahoriana sy haizina, izay ny aloky ny fahafatesana, ary ny zavatra hafa, fa horohoro mandrakizay, mitoetra.
11:1 Fa Zofara Namatita, mamaly, nanao hoe::
11:2 Hanao izay miteny betsaka, tsy koa ny mihaino? Na dia ny be resaka ny olona ho marina?
11:3 Ho olona hangina ihany ho anao? Ary rehefa efa namitaka ny hafa, dia tsy hisy hanaporofoana ny anao?
11:4 Fa hoy: "Ny teninao no madio, ary izaho madio eo imasonao. "
11:5 Nefa Enga anie ka hiteny Andriamanitra aminao, ary dia hiloa-bava ho anao,
11:6 ka mba haneho aminao ny fahendrena miafina, ary ahoana no be pitsiny ny lalàna dia, ary mba ho mahatakatra koa mainka fa izy dia mitaky ny aminareo noho ny heloka mendrika.
11:7 By kisendrasendra, no mahatakatra ny dian'ny 'Andriamanitra sy hahatratra ny lalana rehetra ho amin'ny fahalavorariana ny Tsitoha?
11:8 Izy no ambony noho ny any an-danitra, ary inona no hataonao? Izy no lalina kokoa noho ny helo, fa ahoana no fantatrao?
11:9 Ny fepetra Lava noho ny tany, ary lehibe noho ny ranomasina.
11:10 Raha izay mamadika ny zava-drehetra, na Packs azy ireo, iza no manohitra azy?
11:11 Fa Izy mahalala ny zava-poana ny olona, ary raha mahita heloka, no tsy handinika izany?
11:12 Ny olom-poana voasandratra amin'i fizahozahoana, ary mihevitra fa izy no teraka maimaim-poana tahaka ny zanaky ny boriki-.
11:13 Fa efa mimanda ny fonao, ary nanitatra ny tananao aminy.
11:14 Raha mandefa lavitra anao ny heloka izay eny an-tananao, ary aoka ny tsy rariny fa tsy hitoetra ao amin'ny trano-lay,
11:15 dia ho afaka ny hanandratra ny tavanao tsy misy kilema, ary ianareo ho mafy orina sy natahotra.
11:16 fahoriana, toy izany koa, ianao no manadino, na dia tsarovy ihany no toy ny rano efa nandalo.
11:17 ary ny famirapiratana, tahaka ny mitataovovonana, dia hitsangana eo aminareo mandra-paharivan'ny andro, ary rehefa mieritreritra ny tenanao ho lany ritra, dia hitsangana tahaka ny kintana fitarika andro.
11:18 Ary, rehefa fanantenana no aroso eo anoloanareo, hanana finoana, ary, rehefa nalevina, dia hatory tsy manana ahiahy.
11:19 Dia hitsahatra, ary tsy hisy na inona na inona mba hanaitaitra, ary maro no mangataka eo anatrehanao.
11:20 Fa ny mason'ny ratsy fanahy kosa ny fahalazon'ny, ary ny lalana mba ho afa-mandositra dia ho levona eo anoloany, fa ny fahavetavetana ny fanahy dia ny fanantenany.
12:1 dia Job, namaly, nanao hoe::
12:2 Ianao ve, noho izany, irery ny olona, ary fahendrena maty aminareo?
12:3 Ary manana fo tahaka ny ataonareo ihany, ary izaho tsy latsaka noho ianareo. Fa iza moa no tsy mahalala izany zavatra izany, izay fantatrao?
12:4 Izay namitaka ny namany tahaka ahy, dia Andriamanitra no hantsoiko, dia mihaino azy satria dia ny fahadiovam-po avy amin'ny marina izay no efa naneso.
12:5 Ny jiro izay tsinontsinona eo ny hevitry ny manan-karena no vonona ho amin'ny fotoana voatondro.
12:6 Ny lain'ny jiolahy dia maro, ary ireo no efa niodina an'Andriamanitra tamim-pahasahiana; kosa, Izy no nanome ny zavatra rehetra ho eo an-tànany.
12:7 Raha ny marina, manontany ny ampondra, ary izy ireo no hampianatra anareo, ary ny voro-manidina, ka haneho aminao.
12:8 Mitenena amin'ny tany, Ary dia hamaly anao, ary ny hazandrano any an-dranomasina dia hanazava.
12:9 Iza no tsy mahalala fa ny tànan'i Jehovah no nanao izany rehetra izany?
12:10 Eo an-tànany ny ain'ny rehetra ny velona sy ny fanahin'ny nofo rehetra ny olombelona.
12:11 Tsy mahafantatra ny sofina teny, ary ny vava, rehefa mihinana, mahafantatra tsirony?
12:12 Dia efa antitra aza dia fahendrena, ary ny fahela-velona dia ny fisainana.
12:13 Ao amin'Andriamanitra kosa no misy fahendrena sy hery, Izy no manana hevitra sy fahalalana.
12:14 Raha ranomaso teo, tsy misy izay afaka mamelo-maso; raha encloses ny olona, tsy misy izay afaka manokatra.
12:15 Raha mahatana ny rano, ny zava-drehetra ho maina; ary raha nandefa azy nivoaka, dia handresy ny tany.
12:16 Izy no manana hery sy fahendrena; fantany na ny mpamitaka ary izay no voafitaka.
12:17 Mitarika mpanolo-tsaina ny adala sy ny mpitsara farany ho fahadalana.
12:18 Izay mamindra ny fehin-kibon'ny mpanjaka sy mamihina ny valahany amin'ny tady.
12:19 Mitarika niala mpisorona amin'ny fahafaham-boninahitra sy manan-kaja displaces,
12:20 manova ny molotry ny ireo izay milaza ny marina sy mamafa hiala ny fampianarana ny be taona.
12:21 Mandatsaka distain amin 'ny mpitarika, hanamaivanana ireo izay efa nampahory.
12:22 Izy manambara ny halalin 'ny haizina, Ary mitondra ny aloky ny fahafatesana ho amin'ny mazava.
12:23 Izy Mampitombo ny firenena, ary mandringana azy, ary, rehefa noravana, Mamelombelona azy ireo indray.
12:24 Dia manova ny fon'ny mpitarika ny firenena eto an-tany, ary mamitaka ireo izay foana mialoha eo amin'ny setrasetraina.
12:25 Ho Mitsapatsapa toy ny ao amin'ny maizina, tsy ny fahazavana, Ary hataoko toy ny mpimamo mampivembena.
13:1 Indro, ny masoko efa nahita izany rehetra izany, ary efa ren'ny sofiko, ary efa azon'ny tsirairay.
13:2 Mifanaraka amin'ny fahalalana, I koa fantatro. Ka izaho tsy latsaka noho ianareo.
13:3 Nefa izaho miteny izany ho any amin'ny Tsitoha, ary te hifamaly amin'Andriamanitra,
13:4 rehefa naseho voalohany fa mamorona teti-lainga sy mamboly efa nivadika fampianarana.
13:5 Ary enga anie ka ho tianao hangina, mba ho isaina amin'ny hendry.
13:6 Noho izany, mihaino ny fanitsiana, ary tandremo ny amin'ny fitsarana ny molotro.
13:7 No takin'Andriamanitra ny lainga, mba hiteny fitaka ho azy?
13:8 Efa nandray ny toerana, ary Sarotra aminao ve ny hanome rariny izay manohana 'Andriamanitra?
13:9 Na, dia ho sitrakao azy, avy izay tsy azo ho voafina? Na, no ho voafitaka, toy ny lehilahy, noho ny famitahan'ny?
13:10 Izy no hiampanga anareo, satria ao amin'ny mangingina, no preempted anatrehany.
13:11 Raha vao manosika ny tenany, Izy no hanelingelina anao, ary ny horohoro dia ho latsaka anao.
13:12 Ny fahatsiarovana dia azo ampitahaina amin'ny lavenona, ary ny hatoka dia ho nihena ho tanimanga.
13:13 Mangina kely ireo olona ireo, ka dia mba hiteny na inona na inona an-tsaiko-kevitra ho ahy.
13:14 Nahoana no manimba ny nofoko amin'ny nifiko, ka ento ny fanahinao ao amin'ny tany ny tanako?
13:15 Ary ankehitriny, raha toa ka hamono ahy, Izaho kosa dia hanantena Azy; in ity, tena, Mba hanariko araka ny lalako eo anatrehany.
13:16 Ary Izy no ho famonjena ahy, fa tsy misy mihitsy mpihatsaravelatsihy dia hanatona eo imasony.
13:17 Henoy ny teniko, na hahalala zava-miafina amin'ny sofinao.
13:18 Raha Hotsaraina, Fantatro fa Izaho no ho hita ho marina.
13:19 Iza moa no ho any amin'ny fitsarana amiko? Aoka izy hanatona. Nahoana moa aho no tokony ho lany amin'ny fahanginana?
13:20 Aza manao izany zavatra izany ho ahy indroa, ary avy eo dia tsy manafina ny tavanao amin'ny.
13:21 Raiso ny tananao lavitra ahy, ary aoka tsy hampahatsiravina ahy ny tahotra.
13:22 Antsoy Aho, ary Izaho no hamaly anao, fa raha tsy izany fa izaho dia hilaza, ary afaka mamaly ahy.
13:23 Firy helokareo sy ny fahotanareo no manana? Hita ny heloka bevava sy ny fandikan-dalàna ho ahy.
13:24 Nahoana no manafina ny tavanao, ary mihevitra ahy ho fahavalonao?
13:25 Manohitra ny ravina, izay nentina ho babo avy ny rivotra, ianao haneho ny heriny, ary hanenjika maina mololo.
13:26 Fa zava-mangidy no tendrenao hamely ahy, ary te-handringana ahy noho ny fahotan'ny fahatanorako.
13:27 Efa nametraka ny tongotro teo ambony hampijanona, ary ianao efa notandremako diako rehetra, ary efa nandinika ny diany ny tongotro.
13:28 Dia ho sisa ho simba toy ny zavatra lo sy toy ny fitafiana lanin'ny kalalao ho.
14:1 Man, tera-behivavy, velona nandritra ny fotoana fohy, Feno fahoriana maro.
14:2 Izy mivoaka tahaka ny voninkazo, ary nanorotoro, ary mandositra, toy ny aloka, ary tsy mitoetra araka ny toetra.
14:3 Ary no mihevitra fa mety ny mijery any amin'ny masonao amin'ny olona toy izany sy hitondra azy amin'ny fitsarana aminao?
14:4 Iza no afaka manao hoe madio izay nitoe-jaza ny maloto voa? Moa tsy ianao irery no afaka?
14:5 Ny andro ny olona dia fohy, ary ny isan'ny volana no momba anao; efa nanapa-kevitra ny fetran'ny, izay tsy azo nihoatra.
14:6 Hiala kely amin'ny azy, ka dia hitsahatra, mandra-pahatongan'ny andro niandry tonga, toy ny an'ny mpikarama.
14:7 Ny hazo dia manana fanantenana: raha efa tapaka, raha ny fandehany maitso indray, ary ny sampany mitsiry.
14:8 Raha ny fakany maniry antitra ao amin'ny tany, sy ny vatan-kazo mandalo ho vovoka,
14:9 amin'ny ny hanitry ny rano, dia mbola hitsimoka ka miteraka ravina, toy ny fony iny no voalohany nambolena.
14:10 Marina tokoa, raha misy olona maty, ary efa sisa voaaro, ary efa simba, Manontany anareo aho aiza izy?
14:11 Toy ny hoe efa nihena ny rano avy amin'ny ranomasina sy ny renirano foana efa maina;
14:12 marina izany, raha misy olona efa nodi-mandry, dia tsy hiainga indray, mandra-lanitra tonta lasa; dia tsy hamoha, na hitsangana amin'ny torimasony.
14:13 Iza no hanome izany ho ahy, fa ho hiaro ahy any an-davaka, ka afeno ahy mandra-fahatezerana mandalo, ary hanorina ny fotoana ho ahy, izay ianao dia hahatsiaro ahy?
14:14 Ve ianao mihevitra fa ny olona maty ho velona indray? Ao amin'ny tsirairay avy ny andro izay aho ankehitriny miady, I miandry ny fiovana mitranga.
14:15 Hiantso Ahy ianao ary Izaho no hamaly anao; ny asan'ny tananao, dia hanitatra ny tananao ankavanana.
14:16 Tokoa, efa voalamina ny diako, fa ianareo kosa efa mandefitra amin'ny fahotako.
14:17 Efa voaisy tombo-kase ny fandikan-dalàna, toy ny hoe ao amin'ny kitapom-bola, fa efa sitrana ny helony.
14:18 A nianjera tendrombohitra mivoaka izy, ary ny vato dia afindra hiala amin'ny fitoerany.
14:19 Lanin'ny rano ny vato izy, ary ny tondra-drano ny tany dia mihena tsikelikely; ary toy izany koa, dia ianareo no handringana ny olona.
14:20 Efa nampahery azy ho vetivety foana, ka mba hiampita ho any amin'ny mandrakizay. Dia hanova ny tavany, ka handefa azy nivoaka.
14:21 Na ny zanany no ambony na iva razana, dia tsy hahatakatra.
14:22 Ary toy izany ny vatany, raha mbola fiainana, dia hanana alahelo, ary ny fanahiny dia ory noho ny tenany.
15:1 Fa Elifaza Themanite, namaly, nanao hoe::
15:2 Dia ny olon-kendry hamaly toy ny hoe nisy niteny rivotra, ary no hameno ny kibony amin'ny afo?
15:3 Ianao fitenenany mafy amin'ny teny izay tsy mitovy aminao, ary ianao tsy miteny izay ilaina ho anao,
15:4 ho toy izany hany ka, ao ny tenanao, efa Voaroaka fanajana sy efa hesoriko tsy vavaka avy teo anatrehan 'Andriamanitra.
15:5 Fa ny helokao no hamitaka ny vavanao, ary hanahaka ny lelan'ny niteny ratsy.
15:6 Ny vavanao ihany no hanameloka anareo, tsy izaho; ary ny molotrao no hamaly anao.
15:7 Hianao va no voalohany izay nateraka ho olombelona, na ianao no namorona ny kibo talohan'ny tendrombohitra?
15:8 Efa renareo ny fikasany 'Andriamanitra, ary ny fahendreny ho ambany noho ny anao?
15:9 Inona no fantatrao, momba izay tsy mahalala? Inona no hahatakatra fa tsy fantatsika?
15:10 Misy amintsika na be taona sy ny antitra, ambony kokoa noho ny razanao.
15:11 No tena zava-dehibe fa tokony hitsapa alahelo anao? Fa ny teny ny ratsy fitondran-tena misakana izany.
15:12 Nahoana ny fo hanandratra anao, ary nahoana no mandinika amin'ny masonao, toy ny hoe mieritreritra zavatra lehibe?
15:13 Nahoana ny Fanahy korontana hanohitra an'Andriamanitra, mba hanonona izany teny avy ny vavanao?
15:14 Inona ny zanak'olombelona no mba ho immaculate, ary mba hiseho fotsiny, rehefa tera-behivavy?
15:15 Indro, eo anivon 'ny olona masina tsy iray ihany no loha tsy mety miova, ary na dia ny lanitra aza tsy madio eo imasony.
15:16 Mainka vetaveta sy tsy misy ilàna azy ny olona izay misotro toy ny hoe avy amin'ny rano ny heloka?
15:17 Dia haneho aminao, ka mihaino ahy; fa Izaho no hanazava anao izay efa hitako.
15:18 Ny hendry manaiky, ary tsy mandao, ny razany,
15:19 izay ihany ny tany efa nomena, ary tsy nisy olona hafa firenena nisisika teo aminy.
15:20 Ny ratsy fanahy dia miavonavona Fa ny androny rehetra, ary ny isan'ny taona ny jadona dia tsy azo antoka.
15:21 Ny feon'ny horohoro foana ren'ny sofiny; ary raha misy fiadanana, izy foana miahiahy mpamadika.
15:22 Tsy mino fa azo atao ho azy mba ho lasa amin'ny maizina ho amin'ny mazava, fa hitany manodidina azy ny sabatra manodidina.
15:23 Rehefa manosika tsara hitady mofo, fantany fa ny andron'ny maizina dia efa vonona ny tanana.
15:24 Fahoriana no hampahatsiravina azy, sy ny fangirifiriana Hanjaka eo aminy, tahaka ny mpanjaka, izay no efa vonona hankany an-tafika.
15:25 Fa efa nanitatra ny tanany hanohitra an'Andriamanitra, ary efa nitombo hery hiaro tena hanohitra ny Tsitoha.
15:26 Efa Nihazakazaka azy ny tendany hita, ary efa mitondra ny matavy vozony.
15:27 Hateviny efa nanarona ny tavany, ary lard mihantona nidina niala teo amin'ny lafiny.
15:28 Ary monina ao an-tanana rava sy lao trano, izay efa nivadika ho fasana.
15:29 Tsy ho karena, tsy dia tena ilaina ny miaritra, na no hanorina ny fakany eto an-tany.
15:30 Izy tsy mampitony sy ny maizina; ny lelafo dia hodorany ny sampany, dia ho resy ny fofonain'ny vavany.
15:31 Tsy hino, rehefa vainly voafitaky ny fahadisoana, dia azo avotana ihany na oviana na vidiny.
15:32 Talohan'ny fotoana dia vita, dia handeha ho rava ary ny tanany koa no nahamaina vetivety.
15:33 Izy dia naratra toy ny voaloboka, raha ny sampahom-boaloboka eo amin'ny voninkazo voalohany, ary toy ny hazo oliva izay manetry eny ny voninkazo.
15:34 Fa ny fiangonana, dia ny mpihatsaravelatsihy no vokany, ary nisy afo no handevona ny lain'ny ireo izay tia andraisana vola.
15:35 Izy no niteraka alahelo, ary efa navoakany heloka, sy ny kibo manomana ny fitaka.
16:1 dia Job, namaly, nanao hoe::
16:2 Matetika aho no nandre zavatra toy izany; hianareo rehetra mampitombo ny Mpampionona.
16:3 Ho tsy hisy farany ny rivotra teny? Sa izany mihitsy ho enta-mavesatra ho anareo, raha miteny?
16:4 I, koa, dia afaka miteny toa anao; ary maniry koa aho fa ny fanahinao tarehy ny fanahiko.
16:5 Tiako koa hampionona anareo amin'ny kabary ary dia mihifikifi-doha aminareo aho.
16:6 Mahazo mampahery anareo amin'ny Vavako aho, ary dia mandroso ny molotro, toy ny hoe mandefitra aminao.
16:7 Fa ahoana no hataoko? Rehefa miteny aho, ny alaheloko tsy hangina; Ary raha mangina aho, dia tsy hialany amiko.
16:8 Fa ankehitriny ny alaheloko no nanorotoro ahy, ary ny ratsam-batany rehetra efa nampihena ny na inona na inona.
16:9 Ny ketrona hiampanga ahy, ary mpandainga mitsangana, fa Izaho ihany, mifanohitra ahy.
16:10 Efa namory ny fahatezerana manoloana ahy, ary, mandrahona ahy, efa nierona tamiko ny nify; ny fahavalo nahita ahy amin'ny mahatsiravina maso.
16:11 Izy no nanokatra ny vavany hamelezana ahy, ary, nandatsa ahy, izy no namely ahy teo amin'ny takolako; izy ireo dia mivelona amin'ny ny fijaliana.
16:12 Efa voafetra ahy amin'ny ratsy fitondran-tena, ary Izy efa namonjy ahy ho eo an-tànan'ny ratsy fanahy ny.
16:13 I, izay indray mandeha dia mpanankarena, aho izao torotoro fo. Efa nandray ny tanako vozony; Efa nandrava ahy ary manana hametraka ahy teo anatrehany ho toy ny famantarana.
16:14 Efa naningotra ahy tamin'ny lefona. Efa naratra mafy izy, ny ambany indray, izy tsy mandefitra, ary efa nampidina ny taova eto an-tany.
16:15 Efa nanapaka ahy amin'ny ratra aorian'ny ratra. Efa Nihazakazaka hamely ahy tahaka ny lehilahy mahery Izy.
16:16 Efa nozairina fisaonana noho ny hoditro, ary aho mba nanarona ny tenany amin'ny lavenona.
16:17 Ny tavako nivonto ny fitomanianao, ary ny hodi-masoko efa nanjavozavo ny fahitako.
16:18 Izany teny izany efa naharitra tsy misy ratsy ao an-tanako, raha mbola natao madio ny vavaka eo anoloan 'Andriamanitra.
16:19 O eto an-tany, aza manafina ny rako, na aoka ny fitarainana hahita fierena ao anatinareo.
16:20 Fa, indro, ny vavolombelona any an-danitra, ary ny confidante amin'ny avo.
16:21 Ny namana dia feno teny; ny masoko ny orana dranomaso an 'Andriamanitra.
16:22 Ary enga anie ka misy olona mety ho izany hotsaraina eo anatrehan'Andriamanitra, toy ny Zanak'olona dia nitsara ny mpanampy azy!
16:23 Fa, indro, taona vitsivitsy mandalo, ary izaho mandeha ny lalana izay tsy hiverina aho.
17:1 Ny Fanahiko dia ho rava, androko dia ho fohy, ary ny fasana ihany no sisa ho ahy.
17:2 : Tsy nanota aho, nefa ny masoko dia mitoetra ao mangidy.
17:3 Afaho aho, Tompo O, ka nametraka ahy eo amoron'ny anao, ary aoka ny tanan'ny olona tianao hila ady amiko.
17:4 Efa nametraka ny fony lavitra famaizana; noho izany, izy ireo dia tsy ho hoderaina.
17:5 Mampanantena haza ny namany, Fa ny mason'ny zanany dia hitombo reraka.
17:6 Efa namoaka ahy toy ny ohabolana ho an'ny olona, ary izaho ohatra ny anatrehany.
17:7 Ny mahita tsara no nanakorontana ny fahatezerana, ary ny ratsam-batany no nampihena, toy ny hoe ny na inona na inona.
17:8 Ny marina dia ho talanjona noho izany, ary ny tsy manan-tsiny no mitsangana hanohitra ny mpihatsaravelatsihy.
17:9 Ary ny marina dia mifikitra amin'ny fomba, ary ny madio tanana no hitombo hery.
17:10 Noho izany, hiova fo, ianareo rehetra, ary ny fomba fiasa, fa tsy mahita ao anatinareo na ny fahendrena.
17:11 Ny andro efa lasa; ny eritreritro samy hafa nampielezana, ny fampijalian ny foko.
17:12 Ireny koa dia mihodina alina ataon'ireny ho antoandro, ary manantena aho ny mazava indray ny haizina.
17:13 Raha tokony hiandry, ny davaka no tranoko, ary ao amin'ny maizina no namelarako ny fandriako.
17:14 Izaho efa nilaza ny simba sy ny kankana: "Ianao no raiko, ny reniko, ary ny anabaviko. "
17:15 Noho izany, aiza no fanantenana izao, ary iza moa no mihevitra ny faharetana?
17:16 Ny zava-drehetra avy amin'ny Ahy no hidina any amin'ny lalina davaka; araka ny hevitrao fa, ao io toerana io, fara fahakeliny, hisy fitsaharana ho an'ny ahy?
18:1 Fa Baldad ny Suhite namaly tamin'ny hoe::
18:2 Mandra-pahoviana no manary manodidina teny? Fantaro aloha, ary dia aoka isika miteny.
18:3 Inona izao no tsaboina toy ny ampondra, toy ny hoe tsy mendrika izahay eo anatrehanao?
18:4 Ianao, izay manimba ny tenany amin'ny fahatezerana, dia ny tany ho lao noho ny aminareo, ary ny harambato ho niala tamin'ny toerana?
18:5 Tsy ny fahazavan'ny ratsy fanahy ho faty, ary ny lelafo 'ny afo tsy mety hamiratra?
18:6 Fahazavana ho maizina ao amin'ny lainy, ary ny jirony eo ambonin'ny azy dia ho faty.
18:7 Ny dingana mahery dia ho tery, ary ny fisainany ihany no mandavo azy tsy nisy ohatr '.
18:8 Fa efa nahatonga ny tongony mba miditra ao amin'ny harato, ary efa nandeha ho any amin'ny tranonkala.
18:9 Ny ombelahin-tongony dia hatao ao amin'ny fandrika, sy ny hetaheta ho tezitra hanohitra azy.
18:10 Ny fandrika no miafina ho azy eny ambonin'ny tany, ary ny fandrika, eny ny lalana.
18:11 Ny zavatra mampihorohoro dia tsy handroso hampitahotra azy na aiza na aiza ary hamandrika ny tongony.
18:12 Aoka ny heriny ho nihena ny mosary, ary aoka ny mosary hanafika ny taolan-tehezana.
18:13 Aoka handevona ny hatsaran-tarehy ny hoditra; aoka ny fahiny lanin'ny fahafatesana ny sandriny.
18:14 Aoka ho rovitra ny matoky hiala amin'ny trano-lay, ary aoka loza hanitsaka ny azy toy ny mpanjaka.
18:15 Aoka ny naman'ny izay tsy, hitoetra ao amin'ny lainy; aoka solifara orana nidina teo amin'ny tabernakely.
18:16 Aoka ny fakany ho maina teo ambaniny teo, ary ny vokatra ho torotoro avy any ambony.
18:17 Aoka ny fahatsiarovana azy levona tsy ho amin'ny tany, ary aoka tsy ny anarany hankalazaina eny an-dalambe.
18:18 Izy no handroaka azy hiala amin'ny mazava ho any amin'ny maizina, dia hanala azy amin'izao tontolo izao.
18:19 Na ny taranany, na ny taranany, no hisy eo amin'ny fireneny, na dia misy sisa tavela ao amin'ny fireneny.
18:20 Ary ny farany dia ho talanjona tamin'ny andro, ary ny voalohany no ho resy amin'ny horohoro.
18:21 Ary noho izany, izao no lain'ny ny mpanota, ary ity ny toerana izay tsy mahalala an'Andriamanitra.
19:1 Fa Joba dia namaly ny hoe::
19:2 Mandra-pahoviana no mampahory ny fanahiko ka hampahasosotra ahy teo amin'ny teny?
19:3 Noho izany, im-polo ianao, ary raiki-tahotra ahy tsy menatra ny hampahory ahy.
19:4 Ankehitriny, mazava ho azy, raha efa nahalala, ny tsy fahalalana hiaraka amiko.
19:5 Fa ianareo kosa efa mitsangana hamely ahy, ary miampanga ahy ny henatra.
19:6 Raha kely indrindra dia izao no tokony hahatakatra fa Andriamanitra tsy nampahoriany ahy tamin'ny voalanjalanja fitsarana, na dia efa nanodidina ahy tamin'ny fanindronana.
19:7 Indro, Aho dia mitaraina, maharitra herisetra, Ary tsy hisy handre. Izaho no hanambara mafy, fa tsy misy izay hitsara.
19:8 Efa Niakatra tao ny lalana, ary tsy afa-mandroso aho; efa tonga maizina ho sarotra ny lalana.
19:9 Efa nandroba ahy ny voninahitro, ary efa nangalatra ny satro-boninahitra teo an-dohako.
19:10 Efa nandrava ahy manodidina, ary Izaho no very, ary, toy ny nanongotra hazo, efa nandà tsy hanome ahy fanantenana.
19:11 Ny fahatezerana efa nisian'ny hamely ahy, ary toy izany no efa nitondrany ahy tahaka ny fahavalony.
19:12 Mandroso ny antokon'ny miaramilany miangona, ary nanao ireo fomba ahy, ary dia nanao fahirano ny tabernakely manodidina.
19:13 Efa nametraka ny rahalahy lavitra ahy, ary ny sakaizako efa niala avy amiko tahaka ny olon-kafa.
19:14 Havako Efa nahafoy Ahy, ary ireo izay nahafantatra ahy, efa nanadino ahy.
19:15 Ny mponina any an-tranoko sy ny mpanompovavy hitondra ahy toy raha izaho no vahiny, ary efa toy ny vahiny eo imasony.
19:16 Antsoiko ny mpanompoko, ka tsy namaly; I niangavy azy amin'ny vavako.
19:17 Ny vadiko efa shuddered eo amin'ny fofonaina, ary efa nangataka ny zanaky ny kiboko.
19:18 Na ny adala no nijery teo amiko, ary, rehefa nisaraka taminy, dia niteny ratsy ny ahy.
19:19 Ireo izay indraindray ny mpanolo-tsaina, hitondra ahy toy ny zava-betaveta; ary izay sarobidy indrindra dia mivadika ho fahavaloko.
19:20 Koa satria ny nofo no levona, taolako manaraka ny ny hoditro, ary ihany ny molotro no sisa manodidina ny nify.
19:21 Mamindrà fo amiko, hamindra fo amiko, raha kely indrindra aminareo ry sakaizako, noho ny tanan 'ny Tompo no nanendry Ahy.
19:22 Nahoana no manenjika ahy tahaka an'Andriamanitra no, ary voky ny tenanareo amin'ny nofoko?
19:23 Iza no hanome ahy fa ny teny ho voasoratra? Iza no hanome ahy mba ho voatomboka eo amin'ny boky,
19:24 amin'ny vy penina sy ny vilia ny firaka, na aoka sokitra amin'ny vato?
19:25 Fa fantatro fa velona ny Mpanavotra ahy, ary amin'ny andro farany dia hitsangana avy amin'ny tany.
19:26 Ary Izaho ho nanarona indray ny hoditro, ary ao amin'ny nofoko aho, dia hahita Andriamanitro.
19:27 Izy no ilay Izaho no hahita, ary izay ny masoko hahita, ary tsy misy hafa. izany, ny fanantenako, efa sasatra ao an-tratrako.
19:28 Nahoana ary ianao no manao hoe: "Aoka isika hiezaka hitady azy, ary aoka isika hahita ny antony hiteny ratsy Azy?"
19:29 Koa dia, handositra ny tavan'ny-tsabatra, Fa manan-tsabatra no mpamaly ny amin'izany heloka; fa fantatrao izany: misy ho fitsarana.
20:1 Dia namaly Zofara Namatita ka nilaza hoe:
20:2 Ho setrin'izany, eritreritra isan-karazany hahomby ny hafa ao ahy, ary ny saina no mahatonga haingana amin'ny alalan'ny hevitra samihafa.
20:3 Ny fampianarana ampiasainao mba hananatra ahy, I hihaino, ary ny fanahin 'ny saiko dia mamaly ahy.
20:4 izany, fantatro, dia hatrany am-piandohana, avy ny fotoana izay lehilahy anankiray, mpifehy ny tany:
20:5 fa ny fiderana ny ratsy fanahy dia ho fohy, ary ny fifalian'ny mpihatsaravelatsihy Maharitra fotoana fohy ihany.
20:6 Raha ny fireharehan'ny niakatra na dia manandrify ny lanitra, ary ny lohany mikasika ny rahona,
20:7 amin'ny farany, dia ho ringana tahaka ny fako antontan-javatra, ary ireo izay efa nahita azy dia hanao hoe: "Aiza izy?"
20:8 Toy ny nofy izay manidina lasa, dia tsy ho hita; dia ho levona toy ny nofy ratsy.
20:9 Ary ny maso izay nahita azy, dia tsy hahita azy; tsy misy intsony ny toerana midera azy.
20:10 Ny zanany dia ho tonta hiala amin'ny fahantrana, ary ny tanany koa no hanafaka ny alahelony ho azy.
20:11 Ny taolany dia feno ny fahazaran-dratsy ny tanora, ka matory aminy eo amin'ny vovoka.
20:12 Fa, raha ny ratsy ho mamy ao am-bavany, dia afeniny ao ambanin'ny lelany.
20:13 Izy no mamela izany, ary tsy handao izany, Dia hanafina izany ao amin'ny tendany.
20:14 Ny mofo ny kibony ho tonga ny poizin'ny bibilava ao anatiny.
20:15 Ny harena dia mandany, dia haloanao, ary avy amin'ny kibony Andriamanitra dia manovo azy ihany.
20:16 Izy no hitsentsitra ny lohany ny bibilava, ary ny lelan'ny menarana dia hamono azy.
20:17 (Enga anie izy tsy hahita ny renirano amin'ny ony, ny renirano ny tantely sy ronono.)
20:18 Po dia ho voky izy rehetra nataony, nefa dia tsy ho lany ritra; araka ny vahoaka ny hafetseny, toy izany koa no hijaly.
20:19 Fa, rehefa tapaka in, dia nesoriny ny akanjony ny mahantra. Efa haingana nangalarina trano dia tsy nanorina.
20:20 Anefa ny kibony, dia tsy ho afa-po, ary rehefa manana ny zavatra maniry, dia tsy ho afaka ny hanana azy ireo.
20:21 Na inona na inona sisa ny anjara, ary, noho io, na inona na inona foana ny karazany avy.
20:22 Ary rehefa ho afa-po, dia ho tery; dia ho tra-maraina, ary ny fangirifiriana ho lavo eo aminy.
20:23 Enga anie ny kibony ho feno, ka dia Andriamanitra mba handefa ny firehitry ny fahatezerany ho azy ary mety ny orana nidina ny ady aminy.
20:24 Dia handositra fitaovam-piadiana vy, ary ho lavo amin'ny Arc varahina,
20:25 izay efa hotaritarihina sy efa namoaka avy amin'ny tranony, manelatselatra amin'ny fahoriana mangidy: ny mampihoron-koditra ireo hivoaka sy ny fomba fiasa eo aminy.
20:26 Ny aizim-pito no nafenina ny tsiambaratelo. Ny afo izay tsy napetraka no handringanana azy; dia horavana sy ilaozana ao amin'ny lainy.
20:27 Ny lanitra dia ho hita ny mpanota, ary ny tany hitsangana hiampanga azy.
20:28 Ary ny taranaky ny an-tranony dia hita miharihary; dia ho horavana amin'ny andro ny fahatezeran'Andriamanitra.
20:29 Izany no anjaran'ny ratsy fanahy avy amin'Andriamanitra, ary ny lova ny teniny avy amin'ny Tompo.
21:1 Dia nolazain'i Joba teo anatrehan'izany:
21:2 Dia mangataka aminareo aho mba hihaino ny teniko sy ny manao asa fivalozana.
21:3 aoka aho, fa hiteny aho, ary rehefa afaka izany,, raha mahita fa mety, dia afaka mihomehy ny teniko.
21:4 No fifandirana amin'ny olona, mba tiako tsy misy antony tokony ho kivy?
21:5 Mihainoa ahy dia aoka ho talanjona, ary mametraka ny rantsan ny vavanao.
21:6 Raha ny amiko, rehefa Heveriko fa ny, ahiako, ary tora-kovitra ny tenako convulses.
21:7 Nahoana ary no velona ny ratsy fanahy, fa efa nanandratra sy hahazo hery amin'ny harena?
21:8 Izy ireo hahita ny taranany foana eo anoloany: tabataba ny havana akaiky sy ny zanaky ny zanany eo imasony.
21:9 Ny tranony no tsy manana ahiahy sy tia fihavanana, ka tsy misy tehina 'Andriamanitra azy.
21:10 Dia nanan-anaka ny omby aman'ondriny sy ny tsy mba namotsotra; Ny ombivaviny efa niteraka, ary tsy ho matiantoka ny zanany vao teraka.
21:11 Ny zanany madinika mivoaka toy ny ondry andiany, ary ny zanany hitsambikina manodidina playfully.
21:12 Izy ireo handray ny ampongatapaka sy ny lokanga, ary mifaly amin'ny feon-tsodina.
21:13 Ny andro maro amin'ny harena, nefa, indray mipy, dia hidina any amin'ny helo.
21:14 Iza no efa nilaza Andriamanitra, "Mialà aminay, Fa tsy mila ny fahalalana ny lalanao.
21:15 Iza moa ny Tsitoha, no hotompoinay? Ary ahoana kosa no manampy antsika, raha mivavaka aminy isika?"
21:16 Marina fa ny zava-tsoa dia tsy ao ny heriny. Enga anie ny fisainan'ny ratsy fanahy ho lavitra ahy!
21:17 Ahoana matetika no ny jiron'ny ratsy fanahy ho faty, ary ny safo-drano hahatratra azy, ary impiry no hizara ny fahorian 'ny fahatezerany?
21:18 Izy ireo ho tahaka ny akofa entin'ny tavan'ny ny rivotra, ary tahaka ny lavenona izay manahaka ny tafio-drivotra.
21:19 Andriamanitra dia miaro ny alahelo ny ny ray ny zanany, ary, rehefa hamaly, dia ho fantatrao.
21:20 Aoka ny masony ihany no hahita ny fandringanana, dia hisotro amin'ny fahatezeran'ny Tsitoha.
21:21 Fa mampaninona azy moa izay mitranga any an-tranony mandimby azy, na raha ny isan'ny ny volana dia mihena ny antsasany?
21:22 No misy mampianatra fahalalana masina ho an'Andriamanitra, izay mitsara ny nasandratra?
21:23 Ity misy maty matanjaka sy salama, manan-karena ary sambatra.
21:24 Ny esory tsara ny taovany Feno ny matavy sy ny taolany dia vonton-tsoka.
21:25 Raha ny marina, ny anankiray maty amin'ny fahorian'ny fanahiny, tsy misy loharanon-karena.
21:26 Kanefa izy ireo dia miara-matory ao amin'ny vovoka, ary olitra no handrakotra azy ireo.
21:27 Azo antoka, Fantatro ny hevitrareo sy ny mpanota didim-pitsarana hamelezana ahy.
21:28 Fa hoy ianareo:, "Aiza ny tranon'ny mpanapaka, ary aiza ny lain'ny ny ratsy fanahy?"
21:29 Anontanio misy mpandalo izay tianao, dia ho fantatrareo fa mahatakatra ireo zavatra mitovy:
21:30 fa ny ratsy fanahy dia natokana ho amin'ny andro fandringanana, dia ho voatarika ho amin'ny andro fahatezerana.
21:31 Iza no hananatra ny lalany eo anatrehany, Ary iza no hamaly azy noho izay nataony?
21:32 Dia ho voatarika any amin'ny fasana, ary hitoetra hifoha ao amin'ny korontana ny maty.
21:33 Izy no hita ekena ny amoron 'ny Renirano hira, dia hanatona olona manoloana azy, ary misy maro eo anatrehany.
21:34 Noho izany, mandra-pahoviana no hampionona ahy foana, raha ny valiny dia hita ho maharikoriko ny marina?
22:1 Dia namaly Elifaza Themanite amin'ny hoe::
22:2 Afaka ny olona azo ampitahaina amin'Andriamanitra, na dia dia tanteraka amin'ny fahalalana?
22:3 Inona no soa azon'ny no ho an'Andriamanitra, raha toa ka vao? Ary inona no hanome azy, raha ny lalana tokony ho immaculate?
22:4 Ho Hanameloka anareo sy hitondra anareo ho fitsarana noho ny tahotra,
22:5 fa tsy noho ny asa ratsy maro tsy manam-petra sy ny tsy rariny?
22:6 Fa efa hesoriko tsy ny niantoka ny rahalahinao tsy misy antony, ka nanendaka azy ny akanjon'ny mahantra.
22:7 Ianao tsy nanome rano ho an'ny reraka; efa naka mofo intsony ho an'ny noana.
22:8 Tamin'ny herin'ny sandrinao, ianao nandray ny fizakana ny tany, ka mitana izany amin'ny alalan'ny fanehoana ny matanjaka.
22:9 Efa nandefa ny mpitondratena maina, ary Hianao nanorotoro ny tsorony ny kamboty.
22:10 Noho io, ianao manodidina fandrika, ary tsy nampoizina tahotra no hanelingelina anao.
22:11 Ary nanao ny hevitrao fa tsy hahita haizina ary mba tsy ho tototry ny teo-zozoro ny firehetan'ny rano?
22:12 Efa tsy nandinika fa Andriamanitra dia avo noho ny lanitra, ary dia miavonavona mihoatra noho ny hahavon'ny kintana?
22:13 Ka hoy ianareo:: "Eny, Ataon'Andriamanitra ahoana no fahafantatra?"Ary, "Izy mitsara, toy ny hoe amin'ny alalan'ny zavona,"
22:14 ary, "Ary ny rahona no ho fiereny,"Ary, "Tsy handinika antsika akaiky,"Ary, "Manao ny fihodinana eo amin'ny faritry ny lanitra."
22:15 Ve ianao tsy te-mirona ny lalan'ny mandrakizay, izay olon-dratsy nolavinao?
22:16 Ireo dia nesorina alohan'ny fotoana, ary ny tondra-drano nandrava ny fototra.
22:17 Dia hoy ireo Andriamanitra, "Hialan'ireo aminay,"Ka nitondrany ny Tsitoha toy ny hoe afaka manao na inona na inona,
22:18 na dia efa nameno ny tranony tamin'ny zava-tsoa. Enga anie ny fomba fisainany manalavitra ahy.
22:19 Ny marina hahita ka ho faly, ary ny tsy manan-tsiny no naneso azy ireo.
22:20 Moa tsy ny avonavona voakapa, ary tsy levon'ny afo koa ny sisa tavela amin 'ireo?
22:21 Noho izany, fialan-tsasatra ny tenanao miaraka aminy dia hiadana, ary, amin'izao fomba izao, dia hanana ny tsara indrindra ny voankazo.
22:22 Ekeo ny lalàna avy amin'ny vavany, ary hametraka ny teniny ao am-ponao.
22:23 Raha hiverina any amin'ny Tsitoha, dia ho indray, dia ho mpanota ataovy lavitra ny trano-lay.
22:24 Izy no hanome anao vato eo amin'ny toerana ny vovoka, ary hisy renirano volamena ho solon'ny vato.
22:25 Ary ny Tsitoha no ho hamely ny fahavalonareo, ary ny volafotsy dia hangonina miaraka ho anao.
22:26 Dia ny ondry aman'osy no miara-miravoravo noho ny Tsitoha, ary hanandratra ny tavanao amin'Andriamanitra.
22:27 Ho hifandahatra aminy, dia hihaino anareo, ary dia handoa ny voadinao.
22:28 Ianao no hanapa-kevitra amin'ny zavatra, Ary ny ho avy any aminareo, Ary ny mazava dia hamirapiratra amin'ny lalanao.
22:29 Fa izay efa nanetry tena, ho amin'ny voninahitra; ary izay no hampidina ny masony, dia ho voavonjy ny iray.
22:30 Ny tsy manan-tsiny no ho voavonjy, ary ho voavonjy amin'ny fahadiovana ny tanany.
23:1 Ary Joba dia namaly tamin'ny hoe::
23:2 Ankehitriny indray ny resaka dia amin'ny fahoriana mangidy, ary ny hery ny ny kapoka milanja be kokoa ahy noho ny fisaonako.
23:3 Iza no hanome ahy mba ho fantatro ka hahita azy, ary mba hanatona na dia ho any amin'ny seza fiandrianany?
23:4 Dia apetrako fitsarana eo anoloan'ny masony, ary ny vavako dia hameno amin'ny tsikera,
23:5 ka mba ho fantatro ny teny rehetra izay hamaly aho sy hamantatra izay no hanao amiko.
23:6 Tsy te azy mba hiady amiko be hery, na ny manafotra ahy ny ampahany lehibe ny fahalehibiazany.
23:7 Aoka izy haneho rariny ho setrin'ny ahy, ary aoka ny fitsarana hahatratra ny fandresena.
23:8 Raha mankany amin'ny Atsinanana, tsy hita; raha handeha ho any amin'ny andrefana, Dia tsy hahatakatra azy.
23:9 Raha mitodika any amin'ny ankavia, inona no azoko atao? Dia tsy nahatratra ny azy. Raha mitodika ny tenako ho amin'ny ankavanana,, Tsy hahita azy.
23:10 Marina tokoa, fantany ny lalana ary efa naka fanahy ahy tahaka ny volamena izay mandalo amin'ny afo.
23:11 Ny tongotro no nanaraka ny diany; Efa foana ny lalana ary tsy nania avy amin'izany.
23:12 Tsy mba niala tamin'ny didin'i molony, ary ny tenin'ny vavany nafeniko ao amin'ny ozatra.
23:13 Fa izy irery, ary tsy misy mahay hanelingelina ny fikasany; ary na inona na inona ny fanahiny tiany, fa manatanteraka.
23:14 Ary rehefa manatanteraka ny sitrapony ao amiko, maro hafa ihany koa toy izany koa ho tonga eo aminy.
23:15 Ary, izany no antony, Izaho no mampangovitra ahy eo anatrehany, ary, Raha misaintsaina azy, Aho nanatona ny tahotra.
23:16 Efa nahaketraka ny foko, ary ny Tsitoha efa very hevitra aho.
23:17 Nefa tsy maty noho ny fandrahonana haizina, ary tsy efa haizim-pito ny tavako.
24:1 Ireo no tsy misy fotoan'andro voatendrin'ny Tsitoha; na dia ireo izay mahafantatra azy, Tsy fantatro ny andro.
24:2 Ny sasany efa tafita ny faritry, namabo ny ondry aman'osy, ary nanome azy ahitra.
24:3 Efa noroahina ny borikin'ny kamboty, ary efa naka ny ombivavy avy ny mpitondratena ho tsatòka.
24:4 Efa nanimba ny lalan'ny ny mahantra, ka nanery miaraka ny mpandefitra amin'ny tany.
24:5 Ny hafa, tahaka ny fivoaky ny boriki-dia any an-efitra, fivoak'ireny ho amin'ny asany; raha tsy efa nahita ny remby, dia mahazo hanina ho an'ny zanany.
24:6 Mijinja ny saha izy ireo fa tsy ny, ary mijinja ny tanim-boaloboka izay efa naka an-keriny.
24:7 Ary haniraka olona izy nitanjaka, dia nandray ny akanjo 'ireo izay tsy manana firakotra amin'ny hatsiaka;
24:8 ireo Kotsan'ny orana an-tendrombohitra, ary, satria tsy misy rakotra, izy ireo handray ny vatolampy.
24:9 Nampiasa herisetra izy ireo mba hanaisotra ny kamboty, ary izy ireo no mandroba ny mahantra sarambabem-bahoaka.
24:10 Avy ny mitanjaka sy ireo izay tsy ampy ny akanjo, ary ho an'ny noana, Nalain'olona amboara-bary.
24:11 Izy ireo mitondra ny mitataovovonana sasatra eo amin'ny stockpiles izay, na dia nanosihosy ny famiazam-boaloboka no, nefa mangetaheta.
24:12 Dia amin'ny tanàna, dia nahatonga ny olona misento sy ny Fanahin 'ny voa ka efa ho hiantsoantso, ary toy izany koa Andriamanitra tsy hamela izany ho afa-maina.
24:13 Izy ireo, dia miodina ny mazava; tsy mahalala ny lalany, na dia efa niverina tamin'ny lalana.
24:14 Ny mpamono olona ny olona tamin'ny voalohany miposaka hazavana; dia manome ny mahantra sy ny malahelo, fa, amin'ny fahamarinana, Izy dia tahaka ny mpangalatra amin'ny alina.
24:15 Ny mason'ny mpijangajanga miandry haizina, nanao hoe:, "Tsy nisy maso hahita ahy,"Ary dia manarona ny tavany.
24:16 Izy mandalo tranony ao amin'ny alina, toy ny efa nifanaiky teo nitokana teny an-antoandro; ary tsy mahalala ny fahazavana.
24:17 Raha tokony tampoka fiposahan'ny masoandro hiseho, izany dia raisina amin'ny alalan'ny azy ho toy ny aloky ny fahafatesana; ary mandeha ao amin'ny maizina, toy ny hoe eo amin'ny mazava,.
24:18 Izy no Nimble eny ambonin'ny rano. Ny toerana eo amin'ny tany dia ny ho voaozona. Enga anie izy tsy mba mandeha amin'ny lalana mankany amin'ny tanim-boaloboka.
24:19 Enga anie izy hiampita avy ny oram-panala rano ho tafahoatra ny hafanana, sy ny fahotana, rehetra ny lalana mankany amin'ny helo.
24:20 Aoka ny famindram-po hanadino azy. Ny hatsarany dia kankana. Aoka tsy hotsarovana, fa raha tokony ho torotoro toy ny hazo tsy mamoa.
24:21 Fa efa sakafo ny momba, izay tsy mamoa voa, ary tsy nanao soa ny mpitondratena.
24:22 Efa noravany ny mafy noho ny heriny, ary, rehefa mijoro ny, dia tsy hatoky ny fiainany.
24:23 Andriamanitra efa nanome azy toerana ho an'ny fibebahana, Ary fanararaotana azy amin'ny fizahozahoana, Fa ny mason'Andriamanitra dia mijery ny alehany.
24:24 Izy ireo dia nanandratra kely ireo olona ireo, fa tsy mbola, ary izy ireo dia haetry, toy ny zava-drehetra, ary izy ireo dia halaina aminy, ary, tahaka ny tampon'ny ny salohim-bary, dia ho torotoro.
24:25 Fa, raha izany no tsy toy izany, iza no mahay hanaporofo amiko izay efa nandainga sy ny hametraka ny teniko eo anoloan 'Andriamanitra?
25:1 Ary Baldad ny Suhite namaly tamin'ny hoe::
25:2 Hery sy fampahatahorana no ao aminy izay mahatonga ny fifanarahana amin'ny olona eny amin'ny rivotra.
25:3 Misy fetra ny isan'ny ny miaramila, na ny isan'ny olona noho izay ny fahazavany miakatra?
25:4 Moa tsara ho an'ny olona ny mampitaha ny tenany ho an'Andriamanitra, na hiseho madio na dia tera-behivavy?
25:5 Indro, na ny volana dia tsy miramirana, ary ny kintana aza tsy madio, eo imasony.
25:6 Ny olona mihoatra lavitra noho ny lò sy ny zanak'olombelona mihoatra lavitra noho kankana?
26:1 Dia nolazain'i Joba teo anatrehan'izany:
26:2 Ny mpanampy ianao? Ve izy malemy saina? Ary ianao manohana ny sandriny ny azy izay tsy matanjaka?
26:3 Iza no nanome torohevitra? Angamba ho azy fa tsy misy fahendrena na ny fisainana izay efa nanambara ny maro hevitra.
26:4 Iza moa no te hampianatra ianao? Moa tsy izay nahary ny fofonaina ny fiainana?
26:5 Indro, zavatra goavana misento eo ambanin'ny rano, ka dia hiara-monina aminy.
26:6 Ny davaka-hita miharihary eo anatrehany, ary tsy misy rakotra ho an'ny fahaverezana.
26:7 Ary namelatra ny avaratra ho eny ambonin'ny zava-poana, ary dia natsahatra ny tany ny na inona na inona.
26:8 Ary ny nahazoany ny rano ao amin'ny rahona, ka dia tsy triatra mivoaka midina indray mandeha rehetra.
26:9 Mihazona indray ny tavan'ny seza fiandrianany, ary mamelatra ny rahona hanarona azy.
26:10 Efa nanendry fetra manodidina ny rano, mandra-mazava sy ny maizina, dia hahatratra ny fetra.
26:11 Ny andrin'ny lanitra nihozongozona sady matahotra tamin'ny ataovy mihatohatoka.
26:12 By ny heriny, ny ranomasina tampoka hanangona, ary ny mahatsinjo lavitra efa namely ny mpirehareha.
26:13 Ny fanahiny no efa mihaingo hihaona ny lanitra, ary ny Fiterahana tanana no namoaka ny rivotra, mankao menarana.
26:14 Indro, ireo zavatra ireo no nilaza ny lalany amin'ny ampahany, ary, satria zara raha efa nandre kely indray mitete ny teniny, izay dia ho afaka mba ho faly mijery ny fikotrokotroky ny ny fahalehibiazany?
27:1 Asa ihany koa ny nanampy izany, nampiasa sarin-teny, ka hoy Izy::
27:2 Raha velona koa Andriamanitra, Izay efa nandà tsy hanome ahy ny rariny, ary ny Tsitoha, Izay efa nitondra ny fanahiko ny mangidy,
27:3 raha mbola ny aina mitoetra ao amiko sy ny fofonain'Andriamanitra no mitoetra ao am-bavoroko,
27:4 ny molotro tsy hiteny ratsy, ary tsy ho lelako mihevitra lainga.
27:5 Sanatria amiko mba hitsara anareo ho marina, for, mandra-aina, Izaho tsy mampitony avy ny manan-tsiny.
27:6 Tsy mahafoy ny fanamarinana, izay vao nanomboka hahatakatra, fa ny foko tsy mahita tsiny ho ahy teo amin'ny fiainako manontolo.
27:7 Aoka ny ratsy fanahy ho tahaka ny fahavaloko, ary ny mpanota, tahaka ny fahavalo.
27:8 Fa inona no fanantenana ho mpihatsaravelatsihy, raha fatratra plunders ary Andriamanitra no tsy manafaka ny ainy?
27:9 Andriamanitra mihaino ny fitarainany, rehefa mandresy azy fangirifiriana?
27:10 Sa no handray hiravoravo amin'ny Tsitoha sy ny miantso an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra?
27:11 Hampianatra anareo ny alalan 'ny tanan' Andriamanitra, izay mihazona ny Tsitoha, ary tsy hisorona izany.
27:12 Indro, fantatrao izany rehetra izany, ka nahoana no miteny zava-poana tsy misy antony?
27:13 Izao no anjaran'ny ratsy fanahy ny olona amin'Andriamanitra, ary ny lova mpanao an-keriny, izay dia raisiny avy amin'ny Tsitoha.
27:14 Raha ny zanany dia tokony hitranga mba hampitombo, dia ho an'ny sabatra, ary ny zafikeliny tsy ho voky hanina.
27:15 Na inona na inona no sisa aminy dia nalevina tao amin'ny sisan-javatra rava, ary ny mpitondratena dia tsy hitomany.
27:16 Raha Izy no hanangonana volafotsy toy ny hoe loto sy mamorona teti-fitafiana toy ny hoe izy ireo tanimanga,
27:17 dia Eny, dia hanangona, nefa ny marina no hitafy izany, ary ny tsy manan-tsiny no hizara ny volafotsy.
27:18 Efa nanorina ny tranony tahaka ny kalalao, ary izy efa nanao fialofana vonjimaika toy ny mpitily.
27:19 Rehefa mianjera matory, ny manan-karena lehilahy dia handao azy na inona na inona; dia hanokatra ny masony izy ka nahita na inona na inona.
27:20 Fahoriana no manodidina azy tahaka ny rano; ny tafio-drivotra no hanarona azy amin'ny alina.
27:21 A mirehitra rivotra dia naka azy ka nitondra azy, ary, toy ny tafio-drivotra, dia maika azy avy amin'ny fitoerany.
27:22 Ary hariako eo aminy ary tsy hiantra azy; mandositra ny heriny, dia ho lasan-ko babo.
27:23 Izy no clasp ny tanana ny tenany, dia Misitrisitra tenany, raha mandinika ny toe-javatra.
28:1 Silver manana ny triatra izay izany no hita aloha, ary ny volamena dia manana toerana izay no levona.
28:2 Ny vy dia alaina avy amin'ny tany, sy ny akora, unbound ny hafanana, niova ho varahina.
28:3 Efa nanorina fotoana maizina, ary efa nanorim-ponenana teo tapitra ny zava-drehetra, ary koa ny vato izay any amin'ny haizim-pito sy ny aloky ny fahafatesana.
28:4 Ny mpitety fiangonana may mampisaraka ny olona avy amin'ireo izay efa hadino ny tongotry ny olona mahantra sy ny azo hatonina.
28:5 ny tany, mofo izay niseho tao amin'ny toerany, efa levon'ny afo.
28:6 Ny vato dia nandinika lalina amin'ny safira, sy ny tany, -bolamena.
28:7 Ny vorona no tsy mahalala ny lalana, ary tsy efa ny maso ny ny voltora nahita izany.
28:8 Ary ny zanakalahin'i mpivarotra tsy nandeha teo, ary tsy efa ny liom-bavy nandeha ny alalan 'izany.
28:9 Efa naninjitra ny tànany ho amin'ny vatolampy; Izy no nanjera ny fanambanin'ny tendrombohitra.
28:10 Efa nanapaka ny ony ny alalan 'ny vatolampy, ary ny masony efa nahita zava-tsoa rehetra.
28:11 Ny lalina ny renirano izy, koa mandinika, ary efa nitondra zava-miafina ho any amin'ny mazava.
28:12 Fa, amin'ny fahamarinana, aiza ny fahendrena mba ho hita, ary aiza no fitoeran'ny fahalalana?
28:13 Olona tsy mahalala ny vidiny, ary tsy hita eo amin'ny tanin'ny ireo izay miaina ao mamy.
28:14 Ny lavaka tsy hita noanoa hoy, "Tsy ato anatiko." Ary hoy ny ranomasina, "Tsy miaraka amiko."
28:15 -Bolamena tsara indrindra dia tsy ho karama ho azy, na dia volafotsy ho nolanjainy ho takalon'ny izany.
28:16 Dia tsy azo ampitahaina amin'ny nolokoana loko ny India, na ny tena vato lafo vidy sardonyksa, na amin'ny safira.
28:17 Na volamena na ny fitaratra, dia ho ny mitovy; Ary tsy ho fanaka volamena manify ho azy.
28:18 Ny misandratra sy ny fijangajangana, dia tsy hotsarovana raha ampitahaina aminy. Kanefa ny fahendrena dia voasarika avy-piafenana.
28:19 Ny topaza avy any Etiopia dia tsy ho ampitahaina aminy, ary tsy ho azo ampitahaina amin'ny loko madio indrindra.
28:20 Koa dia, aiza no manomboka ny fahendrena, ary aiza no fitoeran'ny fahalalana?
28:21 Ary efa Miafina amin'ny mason'ny velona rehetra izany, toy ny voro-manidina mandositra filazana.
28:22 Fahaverezana sy ny fahafatesana efa nanao hoe:, "Ny sofinay, efa renay ny lazany. "
28:23 Andriamanitra no mahafantatra ny lalana, ary fantany ny toerana misy.
28:24 Fa mijery ny fetra 'izao tontolo izao, ary mijery ny zavatra rehetra izay eo ambanin'ny lanitra.
28:25 Izy namorona counterweight ny rivotra, ary nampiato ny rano mba handrefesana azy ireo.
28:26 Tamin'izany fotoana izany, dia nanome lalàna ho an'ny orana sy lalan-kaleha ho an'ny manakoako tafio-drivotra.
28:27 Avy eo dia nahita ary nanazava izany, Dia nasainy nofehezina ka nandinika azy.
28:28 Ary hoy ny olona, "Indro ny fahatahorana ny Tompo. Izany no fahendrena. Ary ny hiala amin'ny ratsy, izany no fahazavan-tsaina. "
29:1 Asa ihany koa ny nanampy izany, nampiasa sarin-teny, ka hoy Izy::
29:2 Iza no hanome ahy mba ho tahaka ny teo aloha aho tany amin'ny volana, araka ny andro foana rehefa fiambenana?
29:3 Tamin'izany fotoana izany, ny jirony mbola nazava ny lohako, ary ny fahazavany, No nandehanako tao amin'ny ny haizina.
29:4 Aho dia toy ny tamin'ny andro fony aho mbola tanora, raha Andriamanitra no mangingina ao amin'ny trano-lay.
29:5 Tamin'izany fotoana izany, ny Tsitoha nomba ahy sy ny zanako nanodidina ahy.
29:6 Avy eo, Mbola nanasa ny tongotro tamin'ny rononomandry, ary ny Boulder alatsaka renirano diloilo ho ahy.
29:7 Nankanesako tany am-bavahadin'ny tanàna, na ny lehibe eny an-dalana, dia namboatra ny seza ho ahy.
29:8 Ny tanora nahita ahy ka niampirimpirina, ary ny anti-panahy, eny, nifoha, sisa nitsangana.
29:9 Ny mpitarika nijanona tsy niteny, ary dia nametraka izay nahita ny vavany.
29:10 Ary ny mpifehy ny feony resy, ary ny lelany arahina ny tendany.
29:11 Ny sofina izay nandre ahy, nitso-drano ahy, Ary ny maso izay nahita ahy, nanome fijoroana ho vavolombelona ho ahy.
29:12 Izany dia satria efa nanafaka ny malahelo, izay niantsoantso, ary ny kamboty, izay tsy nanan-kamonjy.
29:13 Ny fisaoran'izay izay ho efa rava tonga tamiko, ary nampionona ny fon'ny mpitondratena.
29:14 Nitafy fahamarinana aho, ary Notafiako lamba ny tenako tamin'ny ny fitsarana, tahaka ny lamba sy ny diadema.
29:15 Aho maso ho an'ny jamba sy tongotra ho an'ny mandringa.
29:16 Izaho no rain'i ny mahantra; ary raha tsy nanana fahalalana momba Na ahoana na ahoana, I fanadihadiana tena tsara.
29:17 I nanorotoro ny nifin'ny ratsy fanahy 'ny, ary nesoriny rembiny amin'ny nifiny.
29:18 Ary hoy izaho:, "Dia ho faty ao amin'ny akanim-borona kely, ary tahaka ny hazo rofia, Hataoko maro ny androko.
29:19 Ny fakany dia niparitaka ao amoron-drano, ary ny ando hitoetra amin'ny ny fijinjana.
29:20 Ny voninahitro ho tafaverina foana, ary ny tsipikako no haverina amin'ny tanako. "
29:21 Ary izay nandre ahy, andrasana fanamarinana, ary nihaino tsara ao amin'ny fahanginana ny anatro.
29:22 Ny teniko, dia sahy hametraka na inona na inona, ary ny fahaiza-miteny aidina azy.
29:23 Niandry ahy toy ny orana, ary nanokatra ny vava toy ny belated orana.
29:24 Raha izay aho no mbola nihomehy azy ireo, dia tsy nino izany, ary ny fahazavan'ny tavako tsy nazera mankany amin'ny tany.
29:25 Raha naniry ny ho any izy ireo, I nipetraka aloha, ary, na dia tahaka ny mpanjaka nipetraka voahodidina ny miaramila, nefa izaho dia mpampionona ho izay izay nisaona.
30:1 Fa ankehitriny, ireo tanora ao amin'ny taona maro dia mihomehy ahy, izay ray aho, dia tsy mba nahita mendrika ny hametraka ny amboa miandry ny ondriko,
30:2 ny herin'ny tànany izay nisy na inona na inona ho ahy, ary izy ireo dia heverina ho tsy mendrika ny fiainana mihitsy.
30:3 Izy ireo Momba amin'ny fahantrana sy ny hanoanana; ny olona nitsakotsako in irery, sosona amin'ny loza sy ny fahoriana.
30:4 Ary chewed ahitra sy ny hodi-kazo avy amin'ny hazo, ary ny fototry ny Feno hazo zenevrie maniry dia ny sakafo.
30:5 Dia nalainy izany avy amin'ny lohasaha mideza, ary rehefa nahita ny iray amin'ireo zavatra ireo, dia nihazakazaka nanatona ny olon-kafa amin'ny mitaraina.
30:6 Ary nonina tany an-efitra sy ny tany karankaina anaty zohy ambanin'ny tany na ambonin'ny vatolampy.
30:7 Dia nifaly teo ireo karazan-zavatra, ary nihevitra azy io ho mahafinaritra eo ambany tsilo.
30:8 Ireo no zanakalahin'i adala sy tena ratsy fanahy,, tsy fandoavana misy tsara ho any amin'ny tany.
30:9 Ankehitriny dia ho ataony an-kira, ary izaho no nanao an-ohabolana.
30:10 Maharikoriko ahy izy ireo, ary izany dia mandositra lavitra ahy, ary tsy misalasala ny handrora ny tavako izy.
30:11 Fa efa niloa-tsipìkany, ary efa nampahory ahy, ary efa nametraka ny lamboridy teo am-bavako.
30:12 avy hatrany, amin'ny fiakaran'ny, ny loza mitsangana ho amin'ny ankavanana. Izy ireo manakorontana ny tongotro ary nanery ahy eny an-dalana toy ny onja.
30:13 Efa navily lalana ny nandehanany; izy, satria mikendry ny otrika ahy, ary efa naharesy, ary tsy nisy olona izay mety hitondra fanampiana.
30:14 Izy ireo Nihazakazaka ahy, tahaka ny manda tapaka, na ny vavahady misokatra, ary efa horavana ao amin 'ny fahoriana.
30:15 Efa nihena ho na inona na inona. Va ny nakanao ny faniriako toy ny rivotra, ary ny fahasalamana efa nandalo toy ny rahona.
30:16 Fa ankehitriny ny fanahiko malazo ao aho, ary ny andro fahoriana hihazona ahy.
30:17 Amin'ny alina, taolako no voatrobaky ny alahelo, ary ireo izay mamahan-Ahy, tsy matory.
30:18 By ny Naripaka daholo ny sarangan'olona isa ireo akanjo efa tonta ny lasa, ary efa nakatona in ahy toy ny vozon'akanjoko ny akanjo.
30:19 Efa tsaboina toy ny loto, ary efa navadika ho vainafo sy ny lavenona.
30:20 Mitaraina aminao aho, ary tsy hihaino ahy. Mijoro eo aho, ary tsy miherika ahy.
30:21 Efa nanova ahy ho hamafin'ny, ary, ny hamafin'ny ny tananao, ianao manohitra Ahy.
30:22 Efa nanainga ahy, ary, mametraka ahy toy ny hoe eo amin'ny rivotra, efa nariana ahy-kery.
30:23 Fantatro fa ho manolotra ahy ho amin'ny fahafatesana, izay nisy an-trano efa niorina ho an'ny rehetra ny velona.
30:24 Marina tokoa, avy eo, tsy manitatra ny tananao mba hahalany ringana azy, ary raha lavo teo, dia hamonjy azy.
30:25 indray mandeha, I nitomany izay mbola azom-pahoriana, ary ny fanahiko onena ny mahantra.
30:26 Nanantena zavatra tsara aho, Fa zava-dratsy no tonga atỳ amiko. Izaho nitsangana teo vonona ny mazava, nefa haizina vaky nivoaka.
30:27 Ny insides no seethed, tsy misy sisa, Fa tonga ny andro fahoriana no nisakana azy.
30:28 I nivoaka fisaonana, tsy misy fahatezerana, ary nitsangana, I niantso in fifanjevoana.
30:29 Aho dia ny rahalahin 'i bibilava, ary ny naman'ny ostritsa.
30:30 Ny hoditro efa tonga mainty ny ahy, ary ny taolako efa maina noho ny hafanana.
30:31 Ny lokangako efa niova ho fisaonana, ary ny fantsona no nivadika ho feo mitomany.
31:1 Tonga teo amin'ny fifanarahana amin'ny masoko, fa tsy dia betsaka tahaka ny mieritreritra momba ny virjiny.
31:2 Fa inona no anjara tokony mihazona Andriamanitra avy any ambony ho ahy, ary inona no lova tokony amin'ny Tsitoha any amin'ny avo mandrakariva?
31:3 Tsy natao ho an'ny fandringanana ny ratsy fanahy sy ny fanipahana marindrano foana ho an'ireo izay miasa tsy rariny?
31:4 Ve izy tsy mandinika ny lalako ka manisa ny diako rehetra?
31:5 Raha mandeha amin'ny zava-poana, na raha ny tongotro haingana mankany amin'ny fitaky,
31:6 aoka izy holanjain'Andriamanitra amin'ny mizana marina, ary aoka Andriamanitra mahalala ny tsotra.
31:7 Raha ny diako dia efa nivily niala tamin'ny lalana, na raha ny foko no nanaraka ny masoko, na raha misy kilema no nifikitra tamin'ny tanako,
31:8 dia enga anie I mamafy, ary aoka olon-kafa handevona, ary aoka ny taranany Tsy hitsy.
31:9 Raha ny foko efa voafitaka ny vehivavy, na raha no andrasako amin'ny otrika amin'ny namako ny varavarana,
31:10 Dia aoka kosa ny vadiko ho ny mpivaro-tena iray hafa, ary aoka ny lehilahy hafa miankina noho izay manjo azy.
31:11 Fa izany no heloka bevava sy ny tsy rariny lehibe indrindra.
31:12 Izany dia afo mandevona ny lalana rehetra ho amin'ny fahaverezana, Ary ny fakany avy no mivelatra rehetra izay nivoaka.
31:13 Raha tàhiny aho nandà ho foto-kevitra ny fitsarana amin'ny mpanompoko, na ankizivaviko, raha nanana alahelo amin'ny sasany ahy,
31:14 Dia inona no hataoko, raha hitsangana Andriamanitra ny mpitsara, ary, raha manontany, Inona no havaliko azy?
31:15 Tsy izay namorona ahy hatrany am-bohoka, koa izay niasa mba hanao azy? Ary tsy iray ihany endrika ahy tany an-kibo?
31:16 Raha tàhiny aho nandà ny mahantra izay tiany ka efa nanao ny mason'ny mpitondratena miandry;
31:17 Raha tàhiny aho nihinana ny sombi ny sakafo irery, raha kamboty tsy mba nihinana izay avy amin'izany;
31:18 (fa avy Mbola zazakely nitombo famindram-po amiko, Ary nivoaka niaraka ahy hatrany an-kibon'ineny;)
31:19 Raha tàhiny aho nijery teo azy izay ho faty noho izy tsy nanan akanjo sy ny mahantra tsy misy sarona,
31:20 Raha ny lafiny tsy nitso-drano ahy, ary raha tsy faly izao monja ny ondriko;
31:21 raha Izaho efa nanangan-tanana noho ny kamboty, na dia toa ny ahy fa ny tombony ho azy eo am-bavahady;
31:22 Dia ho ny tsoroko hilatsaka hiala amin'ny mpiara-, ary aoka ny sandriko, rehetra ny taolany, ho torotoro.
31:23 Fa natahotra an'Andriamanitra foana, toy ny onja tondra ahy, izay lanjan'ny aho, tsy afaka ny hitondra.
31:24 Raha tàhiny aho nandinika ny volamena ho heriko, na raha efa niantso ny volamena madio 'ny Trust;'
31:25 Raha tàhiny ho nifaly noho ny fahombiazana lehibe, ary ny tonian'ny zavatra maro tanako no nahazo;
31:26 raha nibanjina eo ny masoandro, raha namirapiratra izy, ary ny volana hamirapiratra mandroso,
31:27 ka dia faly ny foko ao amin'ny miafina ary nanoroka ny tanako amin'ny vavako,
31:28 izay lehibe dia lehibe ny heloka sy ny fandàvana ny Avo Indrindra Andriamanitra;
31:29 raha ho faly noho ny loza nanjo izay nankahala ahy, ary efa niravoravoan'ny fa misy ratsy nahita azy,
31:30 fa efa tsy nomena ny tendako ny ota amin'ny alalan'ny fangatahana ho fiozonana eo amin'ny ny fanahiny;
31:31 raha ny olona manodidina ny trano-lay tsy hoe: "Mety hanome antsika ny sakafo sasany, mba ho feno,"
31:32 fa ny vahiny tsy hijanona am-baravarana, ny varavarana dia misokatra ny lalana;
31:33 raha, tahaka ny olona no, Nafeniko ny fahotako sy efa nanafina ny heloko tato an-tratrako;
31:34 raha nanjary raiki-tahotra iray tafahoatra vahoaka, ary ny tsy fanajana ny havany akaiky taitra ahy, ka dia mainka aho no nangina, na dia efa nivoaka ny varavarana;
31:35 avy eo, fa izy hanome ahy ny fihainoana, ka dia ny Tsitoha dia hihaino ny faniriako, ary izay mpitsara fa ny tenany manoratra boky,
31:36 izay avy eo hitondra teo an-tsoroko, ary mamatotra manodidina ahy toy ny satro-boninahitra?
31:37 Amin'ny tsirairay ny diako, Aho hanambara sy hanatitra izany, toy ny mpanjaka.
31:38 Noho izany, raha taniko mitaraina hiampanga ahy, Ary raha ny vava asa mitomany izany,
31:39 raha nampiasa ny vokatra ho vola na inona na inona, fa efa ory sy ny fanahin'ny ny tillers,
31:40 avy eo, Mety ny tsilo no miposaka ho ahy fa tsy ny vary, ary ny tsilo hisolo ny vary hordea. (Izany namarana ny tenin'i Joba.)
32:1 Fa izy telo lahy ireo nitsahatra tsy namaly intsony Joba, satria nihevitra ny tenany nohamarinina.
32:2 Ary Eliú, zanak'i Barakela, Bozita, mety ho havan'ny Rama, dia tezitra sady tezitra. Fa dia tezitra tamin'i Joba izy, satria nilaza ny tenany ho marina eo anatrehan 'Andriamanitra.
32:3 Koa, dia tezitra ny namany, satria tsy nahita valiny ny antonony, afa-tsy izany hatrany izy ireo nanameloka an'i Joba.
32:4 Noho izany, Eliú niandry raha mbola niresaka Joba, fa ny anti-panahy ireo izay niteny.
32:5 Fa raha nahita fa ireo telo ireo dia tsy afaka mamaly, Tena tezitra izy.
32:6 Ary toy izany koa Eliú, zanak'i Barakela, Bozita namaly tamin'ny hoe:: Izaho no zandriny amin'ny taona, ary ianareo fahiny kokoa; noho izany, I foana ny lohany ambany, Fa natahotra ny hanambara aminareo ny hevitro.
32:7 Fa efa nanantena fa taona lehibe kokoa mety miteny, ary ny hamaroan'ny taona no hampianatra fahendrena.
32:8 Fa hitako izao fa tsy misy afa-tsy aina ao ny olona, ary fa ny fitaomam-panahy avy amin'ny Tsitoha izay manome ny fahatakaran-javatra.
32:9 Ny hendry Tsy ny be taona, ary tsy ho an'ny anti-panahy ny rariny.
32:10 Noho izany, Fa izaho dia hilaza. Henoy aho, ary hasehoko anareo ny fahendreko.
32:11 Fa efa niaritra ny teny; Efa nihaino ny fiadian, raha ianareo no ho tia mifamaly amin'ny teny.
32:12 Ary raha mbola noheveriny fa ianao hoe zavatra, noheveriko; fa ankehitriny dia mahita fa tsy misy aminareo izay mahay miady hevitra amin'ny Joba, ary mba hamaly ny teniny.
32:13 Mba tsy hoe, "Efa nahita fahendrena,"Andriamanitra efa natsipy azy, fa tsy olona.
32:14 Hoy izy na inona na inona tamiko, ary tsy hamaly azy araka ny teninareo.
32:15 Ary dia feno tahotra, ary toy izany koa izy ireo namaly intsony, ary dia niala avy amin'ny speechmaking.
32:16 Noho izany, satria efa niandry ary aho dia tsy miteny, fa nijoro ho mafy orina, ary tsy namaly mihitsy,
32:17 Izaho kosa hamaly amin'ny anjarako, ary Izaho haneho ny fahalalana.
32:18 Fa izaho kosa dia feno teny, ary ny fihetseham-po teo amin'ny esory tsara ny taovany dia mitaona ahy.
32:19 Eny, ny vavoniko dia tahaka fermenting divay tsy misy hiainana, izay ranolava ny kaontenera vaovao.
32:20 Hotoriko, fa Izaho kosa miaina kely; Hiloa-bava, ary Izaho no hamaly.
32:21 Tsy hihevitra ny laza ny olona, ary tsy milaza fa an'Andriamanitra amin'ny olona.
32:22 Fa tsy fantatro hoe mandra-pahoviana no mbola, ary raha, afaka fotoana fohy, ny Mpanao ahy aho mba hitondra ahy.
33:1 Noho izany, mihainoa ny alahatro, Asa, ary henoy ny teniko rehetra.
33:2 Indro, Izaho efa niloa-bava; Aoka ny lelako hilaza miaraka amin'ny ny tendako.
33:3 Ny teny avy tsotra foko, ary molotro hiteny madio fitsarana.
33:4 Ny Fanahin'Andriamanitra no nanao ahy, ary ny fofonain'ny Tsitoha no nanome ahy ny fiainana.
33:5 Raha afaka ianao, Valio aho, ary hanohitra ahy ny tavako.
33:6 Indro, No efa nanao ahy, araka izay koa no nahasitrana anao, sy izaho, toy izany koa, efa niforona tamin'ny tanimanga iray ihany.
33:7 Noho izany, tena, aza avela ny fahagagana izay hataoko-hampitahotra anareo, ary aza avela ny fahaiza-miteny ho mahavaky tratra anao.
33:8 Fa izay nolazainareo teo reko, ary efa reko ny feon'ny teninao, nanao hoe::
33:9 "Izaho no madio sy tsy nanana ota; Izaho no immaculate, ary tsy misy keloka aho.
33:10 Kanefa efa nahita tsiny ao amiko, ary toy izany koa no nitondrany ahy tahaka ny fahavalony.
33:11 Efa nametraka ny tongotro tamin'ny gadra varahina; izy miambina ny lalako rehetra. "
33:12 Noho izany, dia noho izany antony izany no dia tsy hamarinina. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra dia lehibe noho ny olona.
33:13 Moa ve ianao no hifandahatra aminy, satria izy no tsy namaly ny rehetra ny teny?
33:14 Andriamanitra miteny indray mandeha, ary tsy hamerina zavatra mitovy fanindroany.
33:15 Amin'ny alalan'ny nofy ny tsindrimandry amin'ny alina, rehefa sondrian-tory ny olona, ary izy ireo matory amin'ny fandriany,
33:16 avy eo, dia manokatra ny sofin'ny olona, ary, mampianatra azy ireo, dia mampianatra famaizana,
33:17 ka mba hampiala ny olona amin'ny zavatra izay ataony, ary mba hanafaka azy amin'ny avonavona,
33:18 hanavotana ny fanahiny amin'ny kolikoly sy ny ainy mba tsy mandalo ny sabatra.
33:19 Toy izany koa, dia mananatra ny alahelo am-pandriana, Ary mahatonga ny taolany rehetra ho lasa malemy.
33:20 Mofo lasa fahavetavetana ho azy teo amin'ny fiainany, ary, ny fanahiny, ny hanina izay tsy mbola naniry.
33:21 Ny vatany dia hihaosa, ary ny taolany, izay efa nanarona, dia haseho.
33:22 Ny fanahiny dia nanatona kolikoly, ary ny ainy efa manakaiky ny zava-mahafaty.
33:23 Raha nisy anjely niteny ho azy, iray amin'ny arivo, mba hitory ny rariny ny olona,
33:24 fa hamindra fo aminy, ary Izy hanao hoe, "Afaho izy, ka dia tsy mba hidina amin 'ny famongorana. Efa nahita ny antony mba hankasitrahany azy.
33:25 Ny vatana no levon'ny mijaly. Aoka izy hiverina any amin'ny andron'ny fahatanorany. "
33:26 Izy no mangataka famelan-keloka avy amin'Andriamanitra, dia ho mampitony azy; dia mijery ny tarehiny eo amin'ny pifaliana, Ary hampodiko ny rariny ny olona.
33:27 Izy no mandinika ny olombelona, ary Izy hanao hoe: "Efa nanota aho, ary tena nanafintohina, nefa aho tsy voatsabo araka izay mendrika. "
33:28 Efa afaka ny fanahiko mba tsy mitohy amin'ny fandringanana, amin'izay mba, in velona, dia mety hahita ny mazava.
33:29 Indro, izany rehetra izany Andriamanitra miasa in-telo ao anatin'ny tsirairay,
33:30 ka mba hamelona ny fanahiny amin'ny kolikoly sy hanazava azy amin'ny fahazavan'ny fiainana.
33:31 Tandremo Job, ary mihainoa ahy; ary mangina, raha mbola miteny.
33:32 Na izany aza, Raha manan-kavaly, valio aho ka lazao, fa Tiako ho hitondrana rariny.
33:33 Fa raha tsy manan-kavaly, dia mihaino ahy. Mangina fa hampianariko fahendrena ianao.
34:1 Rehefa manambara ireo zavatra ireo, Eliú izao nanana izany hoe:
34:2 Enga anie ny hendry mihaino ny teniko, ary aoka ny nahita fianarana mihaino ahy.
34:3 Fa ny sofina no mandinika ny teny, ary ny vava mihevitra sakafo ny tsiro.
34:4 Aoka isika hifidy ny rariny ho an'ny tenantsika, ary aoka isika handinika ny tenantsika eo ny tsara indrindra.
34:5 Fa Joba efa nanao hoe:: "Izaho ihany, nefa Andriamanitra no efa nampitanondrika ahy ny rariny.
34:6 Fa, ao anatin'ny ny fitsarana, misy lainga: ny mahamay nefa misy tsilo dia tsy misy ota. "
34:7 Iza no olona izay tahaka an'i Joba, manarampo amin'ny famingavingana toy ny hoe rano,
34:8 izay miaraka ireo izay mpanao meloka, ary izay mandeha amin'ny ratsy fanahy ny olona?
34:9 Fa hoy izy, "Ny olona dia manao ny sitrapon'Andriamanitra, na dia mba nandeha niaraka taminy. "
34:10 Noho izany, lehilahy manan-tsaina, hihaino ahy: impiety dia lavitra avy amin 'Andriamanitra, sy ny heloka dia lavitra avy amin'ny Tsitoha.
34:11 Fa hampodiko ny olona ny asany, ary araka ny fomba ny tsirairay, Izy no hamaly azy.
34:12 Fa marina tokoa, Andriamanitra tsy hanameloka foana, na dia ny Tsitoha handa ny rariny.
34:13 Inona koa no naorina ny tany? Na iza no nampitoeriny manerana izao tontolo izao, izay nataony?
34:14 Fa, raha mitarika ny fony manoloana azy, dia hanatona ny fanahiny sy ny fofonaina ho an'ny tenany.
34:15 Ho levona ny nofo rehetra hiara-, ary ny olona hiverina ho lavenona.
34:16 Noho izany, raha hainao, hihaino izay voalaza, sy manaraka ny feon'ny ny fahaiza-miteny.
34:17 Dia izay tsy tia rariny afaka ahitsy? Ary ahoana no dia Tena hanameloka azy izay vao?
34:18 Hoy izy tamin'ny mpanjaka, "Ianao no mpivadi-pinoana." Niantso mpifehy ratsy fanahy.
34:19 Tsy manaiky ny laza ny mpitarika; sady tsy manaiky ny mpanao jadona araka izay miady manohitra ny mahantra. Fa dia ny asan'ny tànany.
34:20 Izy ireo dia ho faty tampoka, ary ny olona dia ho raiki-tahotra eo afovoan'ny ny alina, fa handeha hamaky izany, ary ny herisetra dia lasa tsy esorin-tanana.
34:21 Fa ny mason'Andriamanitra dia mijery ny alehan'ny olona, ary ny rehetra dia dinihiny avokoa ny diany.
34:22 Tsy misy aizina ary tsy misy aloky ny fahafatesana, izay ireo izay mpanao meloka azo nafenina.
34:23 Fa tsy ao intsony ny herin 'ny olona hiditra amin'ny fitsarana amin'Andriamanitra.
34:24 Dia hotapahiny ho maro tsy hita isa farantsa, dia hahatonga ny hafa mba hitsangana amin'ny fitoerany.
34:25 Fa Izy mahalala ny asany, ary, vokatr'izany, dia mbola ho entiny ny alina, ary dia ho torotoro.
34:26 Toy ny ratsy fanahy ataovy, Izy no namely azy any amin'ny toerana izay afaka ny ho hita.
34:27 izy ireo, toy ny hoe miaraka amin'ny fahazotoana be, efa niala taminy, ary tsy nety hahatakatra lalany rehetra,
34:28 Dia ny mba hahatonga ny fitarainan'ny malahelo mba hahatratra azy, Ary Jakoba nandre ny feon 'ny mahantra.
34:29 Fa, rehefa manome fiadanana, iza no afaka manameloka? Ary raha manafina ny tavany izy, iza no afaka mandinika azy, na any amin'ny firenena, na amin'ny olona rehetra?
34:30 Dia mahatonga ny olona mba hanjaka mpihatsaravelatsihy noho ny fahotan 'ny olona.
34:31 Noho izany, satria Izaho no niresaka momba an'Andriamanitra, Tsy hanakana anao tsy hanao toy izany koa.
34:32 Raha diso, mba hampianatra ahy; raha Izaho no niteny tsy ara-drariny, Hampiako intsony.
34:33 No takin'Andriamanitra izany aminareo, satria izany dia tezitra aminao? Fa ianao no voalohany niteny, ary tsy izaho. Fa raha fantatrao zavatra tsara kokoa, miteny.
34:34 Ny olona manam-panahy hilaza amiko, ary aoka ny olon-kendry mihaino ahy.
34:35 Fa Joba efa niteny adaladala, ary ny teniny mirakitra antoka ny zavatra resahin'ny fampianarana.
34:36 Ny raiko, aoka hitsapana an'i Joba hatramin'ny farany; mba Tsy mihemotra amin'ny olona ratsy.
34:37 Fa ampiany fitenenan-dratsy eo an-tampony ny fahotany; kanefa, aoka izy ho voatery ho eto amintsika, ary dia aoka mampahatezitra an'Andriamanitra ny fitsarana ny kabariny.
35:1 Rehefa afaka izany,, Eliú indray niteny toy izany:
35:2 Moa ve izany toa tsara ho anao ao ny eritreritrao, izany ka hanaovanao hoe, "Izaho no marina noho Andriamanitra?"
35:3 Fa hoy, "Rehefa nanao ny tsara tsy hahafaly anao,"Ary, "Inona no soa ho anao izany, Raha manota aho?"
35:4 Ary noho izany, Dia hamaly ny teninareo, sy ny namanao izay miaraka aminao.
35:5 Jereo ny nankany an-danitra sy handinika; koa, mieritreritra momba ny lanitra, izay ambony kokoa noho ianao.
35:6 Raha manota, ahoana no nampalahelo azy? Ary raha ny helokareo efa betsaka, Inona no hataonao azy?
35:7 Koa, Raha hanao ny marina, inona no homenao azy, na inona no horaisiny avy amin'ny tananao?
35:8 Ny impiety Mihatra amin'ny olona iza no tahaka anao, ny rariny aza dia mety hanampy ny zanaky ny lehilahy.
35:9 Noho ny haben'ny mpanendrikendrika, dia hiantsoantso; ary hitomany noho ny sandrin'ny mahery ny olon-dozabe.
35:10 Anefa izy tsy nanao hoe:: "Aiza Andriamanitra, Izay nanao ahy, Izay nanome fiderana amin'ny alina,
35:11 Izay manome fahalalana antsika ho fanampin 'ny biby eto an-tany, ary izay mampianatra antsika miaraka amin'ny voro-manidina?"
35:12 Fa any no hiantsoantso, dia tsy hihaino azy ireo, noho ny fireharehan'ny ratsy fanahy.
35:13 Noho izany, Andriamanitra tsy mihaino foana, ary ny Tsitoha no handinika tsirairay sy ny toe-javatra rehetra.
35:14 Ary noho izany, rehefa hoe, "Tsy mandinika,"Hotsaraina eo anatrehany, fa miandry azy.
35:15 Fa, amin'izao fotoana, tsy maintsy mamoaka ny fahatezerana, sady tsy manasazy ny fahotana izaitsizy tokoa.
35:16 Noho izany, Joba efa niloa-bava foana, ary efa maro teny tsy misy fahalalana.
36:1 Mitohy ao Toy izany koa, Eliú nanana izany hoe:
36:2 Mijoroa amiko ho vetivety dia hambarako anao; fa manana bebe kokoa hoe manohana an'Andriamanitra.
36:3 Dia hamerina ny fahalalako hatrany am-piandohana, ary dia hanaporofo ny Mpanao ahy aho mba ho marina.
36:4 Fa ny teniko dia tsy misy lainga sy ny fahalalana tanteraka, dia ho voaporofo ny aminareo.
36:5 Andriamanitra tsy manary ny mahery, fa ny tenany ihany koa mahery vaika.
36:6 Fa tsy afa-tsy ny ratsy fanahy, na dia manome rariny ho an'ny mahantra.
36:7 Tsy haka ny Mijery ny marina, Ary mandrakariva mametraka mpanjaka ambonin'ny seza fiandrianany ny, ka dia tafasandratra.
36:8 Ary, raha toa izy ireo dia efa babo, na tsy maintsy miaraka amin'ny gadra ny fahantrana,
36:9 dia hita ho azy ireo ny asa, ary koa ny mpanota, amin 'izany izy ireo herisetra.
36:10 Toy izany koa, Izy no hanokatra ny sofiny ny fanitsiana, dia niteny taminy, mba hibebaka hiala amin'ny ratsy.
36:11 Raha mihaino sy mankatò, dia hameno ny androny feno hatsaram-hamitana ny taonany amin'ny voninahitra.
36:12 Fa raha tsy mihaino, dia ho levona noho ny sabatra ary ho levon'ny fahadalana.
36:13 Ny lainga sy ny fetsy mampahatezitra ny fahatezeran 'Andriamanitra, nefa tsy mitaraina aminy rehefa izy ireo mifatotra.
36:14 Ny fanahiny dia ho faty ao amin'ny tafio-drivotra, ary ny ainy, teo anivon 'ny vavivavy toetra.
36:15 Izy no hamonjy ny malahelo amin'ny fahoriany, dia hanokatra ny sofiny mandritra ny fahoriana.
36:16 Noho izany, Izy no hamonjy anareo amin'ny tena tery be vava, na dia tsy misy fototra ambaniny. Koa, ny fialantsasatra nipetraka nihinana, dia ho feno ny tsiron'ny.
36:17 Ny raharaha efa voatsara toy izany ny ratsy fanahy; dia hiala ny fiangaviana sy ny fitsarana.
36:18 Noho izany, aza avela hanafotra anao fahatezerany mba mampahory hafa; sady tsy tokony hamela ny maro ny fanomezam-pahasoavana mba hisy vokany eo aminao.
36:19 Nandry ny fahalehibeazany tsy misy fahoriana, ka asio manokana ny hery rehetra amin'ny herim-po.
36:20 Aza tsy ho maro ny alina, na dia ny olona mitsangana ho azy.
36:21 Tandremo fa tsy mivily ho amin'ny ratsy; for, araka ny fahoriana, ianao no nanomboka ny hanaraka izany.
36:22 Indro, Andriamanitra dia misandratra amin'ny heriny, Ary tsy misy tahaka azy eo amin'ny lalàna-mpanolotra.
36:23 Iza no afaka ny fanadihadiana ny fomba? Ary iza no afaka milaza, "Efa nanao ratsy,"Ho azy?
36:24 Tsarovy fa ianao no tsy mahalala ny asany, nefa olona an-kira ny fiderana.
36:25 Hevero tsara ny olona rehetra; ary samy kosa mandinika avy lavitra.
36:26 Indro, lehibe Andriamanitra, nandresy ny fahalalantsika; ny isa ny taonany dia hay tombanana.
36:27 Mitondra izy no miteraka ny orana, ary Mampandeha ranonorana tahaka ny nisamboaravoara whirlpool;
36:28 dia hirotsaka avy amin'ny rahona izay tenona ambony ny zava-drehetra.
36:29 Raha izay sitrapony izany, izy dia nanitatra ny rahona toy ny lainy
36:30 ary mazava ny fanazavana avy any ambony; toy izany koa, dia manarona ny ranomasina tao anatin'ny lainy.
36:31 Fa no itsarany ny firenena noho ireo zavatra ireo, Ary manome hanina ho any ny maro ny olombelona.
36:32 Ao anatin'ny ny tànany, dia manafina ny fahazavana, ary mandidy azy mba hamoaka indray.
36:33 Dia manambara izany ny namany, fa amin'ny zara-taniny, ary dia afaka ny hanampy azy.
37:1 Dia, nanjary raiki-tahotra ny foko, ary izany dia efa nifindra avy eo amin'ny toerana.
37:2 Dia mifantoka loatra amin'ny ny fanairana ny feony sy ny rohona izay mivoaka avy amin'ny vavany.
37:3 Izy mijery ny zava-drehetra ambanin'ny lanitra, ary ny fahazavany tonga any an-dafin'ny faran'ny tany.
37:4 Rehefa afaka izany,, ny tabataba haneno; Izy no hampikotrokorana ny feon'ny ny fahalehibiazany, Ary tsy ho fantarina teo, nefa ny feony dia ho nankatò.
37:5 Andriamanitra no hampikotrokorana amin'ny feony amin'ny fomba mahagaga, fa manao zavatra lehibe sy tsy takatry ny saina.
37:6 Mandidy ny oram-panala ny hidina eto an-tany, ary ny ririnina orana, ary ny ranonorana ny heriny.
37:7 Izy signe ny tanan'ny olona rehetra, ka dia samy ho fantatry ny asany.
37:8 Ary ny bibi-dia hiditra ho fiereny, dia hitoetra ao ny lava-bato.
37:9 Avy ny anatiny, ny oram-baratra ho avy nivoaka, ary ny ririnina mangatsiaka avy any avaratra.
37:10 Amin'ny maha Andriamanitra miaina avy, fanala teny, ary ny rano dia efa nahahany eny tena be indray.
37:11 Vokatra maniry rahona, ary ny rahona hampiely ny fahazavany.
37:12 Dia mazava manodidina, na aiza na aiza ny sitrapon 'Izay mitantana aminy no hitarika, ny na aiza na aiza izy handidy, ny rehetra ambonin 'ny tany,
37:13 na ao amin'ny firenena iray, na tao an-faritra, na na inona na inona toerana ny famindram-pony fa dia baiko azy ireo mba ho hita.
37:14 Henoy izany zavatra izany, Asa. Mitsangàna ka mba diniho ny fahagagana ataon'Andriamanitra.
37:15 Fantatrao ve hoe rehefa nandidy ny orana, mba hampisehoana ny fahazavan'ny ny rahona?
37:16 Fantatrao ve ny lehibe lalan'ny ny rahona, ary ny tonga lafatra siansa?
37:17 Tsy ny fitafianareo mafana, raha mitsoka ny rivotra avy any atsimo manerana ny tany?
37:18 Angamba ianao no nanao ny lanitra niaraka taminy, izay tena matanjaka, toy ny hoe efa natsipy avy varahina.
37:19 Hita ho antsika ny zavatra tokony hanao aminy hoe:, for, mazava ho azy, isika mifono ao amin'ny maizina.
37:20 Iza no hanazava azy ny zavatra izay aho nanao hoe:? Na raha mbola ny olona no mbola miteny, dia ho lanin'ny.
37:21 Na dia tsy hahita ny mazava, ny rivotra dia nivaingana tampoka ao an rahona, ary ny rivotra, nandalo, dia handroaka azy hiala.
37:22 Harena tonga avy any avaratra, sady mahatahotra izao manolo- tanana fiderana an'Andriamanitra.
37:23 Isika tsy mendrika ny ho afaka hahita azy. Lehibe amin'ny hery, lehibe amin'ny fitsarana, lehibe ara-drariny: dia tsy hay lazaina.
37:24 Noho izany, olona dia matahotra azy, ary izay rehetra toa ny tena ho hendry, Tsy sahy ny mieritreritra azy.
38:1 Fa ny Tompo, mamaly ny Joba avy amin'ny tafio-drivotra, nanao hoe::
38:2 Iza moa Ity no mba fehezan-teny amin'ny traikefa Fonosiny teny?
38:3 Fehezo ny andilany tahaka ny lehilahy. Dia hanontany anao, ary tsy maintsy mamaly ahy.
38:4 Taiza ianao, raha nametraka ny fototry ny tany? Teneno aho, raha hainao.
38:5 Iza no nametraka refiny, Raha fantatrao, na iza no nanenjana ny famolaina teo ambonin'io koa?
38:6 Rehefa inona no ny faladiany no hiorina, ary hanangona ny vato fehizorony,
38:7 raha ny kintan'ny maraina niara-nidera ahy, ary ny zanak'Andriamanitra nanao feo fifaliana?
38:8 Iza no fonosina ny ranomasina tamin'ny varavarana, rehefa nandrava nivoaka toy ny hoe namoaka hatrany am-bohoka,
38:9 rehefa nijanona ny rahona ho toy ny lamba ka nofonosiny zavona toy ny hoe fonony ny zaza?
38:10 Dia nanodidina azy ny fetran'ny, ary napetraka ny hidy sy varavarana.
38:11 Ary hoy izaho:: "Hatreto no hanatona, ary dia i intsony, ary eto ianao hotapahiko ny fisafoakany onja. "
38:12 ve ianao, araka ny teraka, mandidia ny nahaterahan'i ny masoandro sy mampiseho ny fiposahan'ny masoandro ny toerana?
38:13 Ary izy no mihazona ny faran'ny tany, mangovitra azy ireo, ary ianao nohozongozonina ny ratsy fanahy avy ao aminy?
38:14 Ny tombo-kase dia haverina toy ny tanimanga, ary dia hitoetra eo amin'ny tany toy ny fitafiana.
38:15 Avy amin'ny ratsy fanahy, ny fahazavana dia hesorina, ary ny misandratra dia ho tapaka ny sandry.
38:16 Efa niditra ny halalin 'ny ranomasina, ary no naka ny mandeha any am-paran'ny 'ny lavaka tsy hita noanoa?
38:17 Moa ny vavahadin'ny fahafatesana no hovohana ianareo, ka dia efa nahita ny varavaran'ny maizina?
38:18 Efa nandinika ny namaky ny tany? Raha mahalala ny zavatra rehetra, manambara azy ireo ho ahy.
38:19 Izany Fanahy izany no fomba izay mihazona ny mazava, ary izay no fitoeran'ny maizina?
38:20 Amin'izao fomba izao, mety hitarika zavatra tsirairay ho amin'ny toerana farany, ary hahatakatra ny lalan'ny ny trano.
38:21 Koa dia, no fantatrao, raha ianao ho teraka? Ary Fantatrao ve ny isan'ny andronao?
38:22 Efa tafiditra tany amin'ny firaketana ny snows, ary ianao nibanjina eo ny hieritreretantsika ny solifara,
38:23 izay efa nomaniko ho amin'ny andro fahavalo, fa ny andron 'ny ady sy ny ady?
38:24 Amin'ny fomba ahoana no fahazavana niparitaka, ary ny hafanana nozaraina, ny tany?
38:25 Iza no nanome ny Mazava ho azy fa ny rainstorms, sy lalan-kaleha ho an'ny manakoako kotroka,
38:26 ka hahatonga azy io ranonorana eto an-tany lavitra amin'ny olona, tany an-efitra tsy misy eto an-tany izay mbola nijanonjanona,
38:27 ka hahatonga azy io hameno azo naleha sy lao toerana, ary mety hiteraka zava-maniry maitso?
38:28 Iza moa ny rain 'ny orana, na niteraka ny ranon'ando?
38:29 Avy Kibon'iza no ivoahan'ny ranomandry, ary izay namorona ny fanala avy amin'ny rivotra?
38:30 Ny rano dia mafy fo mba ho tonga tahaka ny vato, ary ho etỳ ambonin'ny ny lavaka tsy hita noanoa mivaingana ny.
38:31 Ho manana ny hery mba hiaraka hiara-ny mamirapiratra kintana eny amin'ny Pleiades, na ianao afaka mba hanaparitahana ny circling ny Arcturus?
38:32 Afaka mamoaka ny kintana fitarika andro, amin'ny fotoany, ary manao ny hariva kintana fiakaran'ny noho ny zanaky ny tany?
38:33 Fantatrao ve ny lamina any an-danitra, ary afaka no hanazavanao ny fitsipika eto an-tany?
38:34 Afaka manandratra ny feonao ho amin'ny rahona matevina, ka dia ny fanafihana ny rano dia handrakotra anao?
38:35 Mahay mandefa ny helatra nivoaka bolts, ka izy ireo handeha, ary ny niverina, lazaiko aminareo: "Indreto izahay?"
38:36 Iza no nametraka fahaiza-manavaka ao amin'ny tsinay ny olona, Ary iza no nanome fahalalana ny akoho?
38:37 Iza no afaka mamaritra ny fitsipiky ny lanitra, na iza no hovonoina ho fitsaharana ny mifanaraka ny any an-danitra?
38:38 Oviana ny vovoka natsipy ho tonga eto an-tany, Ary rehefa nandinika ireo ny bainga miara-?
38:39 Ve ianao nisambotra toha ho an'ny liom-bavy, ary no hanohana ny fiainan'ireo zanany,
38:40 raha mandry amin'ny lavaka, na manotrika ao lavaka famorian-drano?
38:41 Iza no manome ny goaika sy ny sakafo, raha ny zanany kely mitaraina amin'Andriamanitra, rehefa mirenireny manodidina satria tsy manana sakafo?
39:1 Fantatrao ve hoe amin'ny firy ny osi no niteraka teo amin'ny vatolampy, na no mandinika ny serfa rehefa miditra ao ny asa?
39:2 Efa nandamina ny volana hatramin'ny ny kibo, ary fantatrao ve amin'ny firy izy ireo niteraka?
39:3 Manenjana ny tenany izy ireo noho ny taranany, ary miteraka, ary ataon-drizareo mirohondrohona.
39:4 Ny tanora dia nosarahi-nono ary mankanesa any an sakafo; miala ka tsy hiverina ho azy ireo.
39:5 Iza no nametraka ny boriki-dia maimaim-poana, ary izay namoaka ny famatorana?
39:6 Efa nomeko trano ao irery azy, Ary ny tabernakely dia any amin'ny tany sira.
39:7 Izy tsinontsinona ny tanàna feno olona; tsy mihaino ny Bellow ny mpamory hetra.
39:8 Ary mijery manodidina ny tendrombohitra ny ahitra, ary mandinika na aiza na aiza ny zava-maniry maitso.
39:9 Moa ve ny rhinoceros Mba mety manompo anao, ary izy hijanona ao amin'ny fihinanam-bilona?
39:10 Afaka hotananay ny rhinoceros amin'ny fiadiana mba hiasa ho anao, ary no hamaha ny tanin'ny-bavasa eny aorianao?
39:11 No mametraka ny finoanao ny hery lehibe, ary manome ny asa ho azy?
39:12 Azonao itokiana va izy mba hiverina aminareo ny voa, ary ny hanangona azy amin'ny paharitry tany?
39:13 Ary ny elatry ny ostritsa dia toy ny elatry ny vano, ary ny hitsikitsika.
39:14 Rehefa mandao ny atodiny ao ambadiky ny eto an-tany, ianao angamba no manafana azy ao amin'ny vovoka?
39:15 Izy manadino fa ny tongotra mba hanitsaka azy, na dia ny biby any an-tsaha mba manorotoro azy ireo.
39:16 Izy no nanamafy hamely azy tanora, toy ny hoe tsy ny azy izy ireo; izy no nisasatra foana, tsy misy fahatahorana maharesy lahatra azy.
39:17 Fa Andriamanitra efa nampanadinoin'Andriamanitra ny fahendrena izy; ary tsy nomeny fahalalana.
39:18 Na izany aza, raha ny fotoana marina, izy manangana ny elany ambony; izy hihomehezan'ny ny soavaly sy ny mpitaingina azy.
39:19 Azonao manome hery ny soavaly, na valopy ny tendany amin'ny naneno?
39:20 Azonao fanairana azy toy ny valala aza? Ny tahotra no asehon'ny ny fampisehoana teo am-bavorony.
39:21 Dia mihady ny tany amin'ny kitro; jumps manodidina izy tamim-pahasahiana; dia mandroso hihaona olona mitam-piadiana.
39:22 Izy tsinontsinona ny tahotra; tsy miala amin'ny sabatra.
39:23 Ambony azy, ny tsipìkany rattles, ny lefona sy ny ampinga mihorohoro.
39:24 Nisamboaravoara ary nisamboaravoara, Tsy misotro ny tany; ary tsy miato izy, rehefa ny fipoahana ny anjomara feo.
39:25 Rehefa mandre ny Bugle, hoy izy, "Manana!"Izy fofona ny ady avy lavitra, ny fampirisihana ny mpiandry raharaha, ary ny ady fitarainan'ny miaramila.
39:26 Ve ny voromahery mitombo volo amin'ny alalan'ny ny fahendrenao, fanelezana ny elany any amin'ny tany atsimo?
39:27 Moa ve ny voromahery ny tenany ka hanandratra ny didinao sy anaovany ny akaniny eny amin'ny hantsana toerana?
39:28 Izy no monina eo amin'ny vatolampy, ary mbola nijanonjanona eo torotoro vatobe sy tsy azo atonina harambato.
39:29 avy teo, izy mitady sakafo, ary ny masony mitsangana ao izany avy lavitra.
39:30 Ny tanora dia hisotro ra, ary na aiza na aiza ny fatiny dia ho, izy no avy hatrany.
39:31 Ary Jehovah mbola, Ary hoy Joba:
39:32 Ho izay miady amin'Andriamanitra ho mora bava? tokoa, Izay mananatra an'Andriamanitra dia tsy maintsy koa mamaly azy.
39:33 Ary Joba dia namaly an'i Jehovah, nanao hoe::
39:34 Inona no mety mamaly aho, satria aho efa tsy voahevitra,? Dia hametraka eo amboniny ny tanako ny vavako.
39:35 Zavatra iray loha no niteny, izay tiako aho, tsy hoe; ary ny anankiray koa, izay hampiako intsony.
40:1 Fa ny Tompo, namaly Joba teo amin'ny tafio-drivotra, nanao hoe::
40:2 Fehezo ny andilany tahaka ny lehilahy. Dia hanontany anao, ary tsy maintsy mamaly ahy.
40:3 No manao ny fitsarana nahafoana; ary no hanameloka ahy mba ho marina?
40:4 Ary Moa ve Ianao Manana tsandry tahaka ny an'Andriamanitra, na-peo tahaka ny kotro-baratra?
40:5 Envelop ny tenanao amin'ny voninahitra, ary manangana ny tenanao ho amin'ny avo, ary ho be voninahitra, ary hitafy fitafiana kanto.
40:6 Hampielezako ny mpirehareha amin'ny fahatezeranao, ary, rehefa mahita ny mpirehareha rehetra, manetry tena izy ireo.
40:7 Mitsinjova eny rehetra isan 'ny mpiavonavona ary hampahamenatra azy ireo, ary hanorotoro ny ratsy fanahy eo amin'ny fitoerany ihany.
40:8 Asitriho ao amin'ny vovoka avokoa izy rehetra ka mandentika ny tarehiny any an-davaka.
40:9 Dia Aho, fa hanaiky fa ny tananao ankavanana mahavonjy anao.
40:10 Indro, ny behemota, izay namorona ny miaraka aminao, mihinana bozaka toy ny omby.
40:11 Ny heriny dia ao amin'ny ambany indray, ary ny heriny dia ao amin'ny ivon 'ny kibony.
40:12 Mitaona ny ny rambony ho tahaka ny hazo sedera; ny ozatra amin'ny feny no mby niara-.
40:13 Ny taolany dia tahaka ny fantsom-barahina; ny taola-malemy dia tahaka ny takela-by.
40:14 Izy no fiandohan'ny fomba 'Andriamanitra, Izay nanao azy; dia hampiasa azy toy ny sabatra.
40:15 Ny tendrombohitra haniry ahitra ho azy; ny biby rehetra any an-tsaha dia milalao.
40:16 Dia natory tao amin'ny aloka, ambany ny rakotra fanaovam-panavotana ny sampana, ary amin'ny toerana mando.
40:17 Ny aloka hanarona ny alokalony; ny hazomalahelo eny amoron'ny ony dia hisakambina azy.
40:18 Indro, dia misotro ny renirano, ary tsy ho talanjona, ary manana fahatokiana fa Jordana afaka hirotsaka amin'ny vavany.
40:19 Izy no sambory Izy amin'ny alalan'ny ny masony, toy ny hoe amin'ny fintana, dia niteraka alalan'ny vavorony, toy ny hoe amin'ny tsatòka.
40:20 Mahasarika ny mamba amin'ny ny hook, ary no azonao hamatotra ny lelany amin'ny mahazaka?
40:21 Afaka mametraka peratra ny orona, na niteraka ny alalan 'ny valanoranony amin'ny sandry tarika?
40:22 No hanome vavaka maro ho anao, na hiteny aminao mangingina?
40:23 No mamorona fanekena aminao, ary ianao hanaiky azy ho mpanompo mandrakizay?
40:24 Azonao milalao azy toy ny vorona, na hampijanona azy noho ny ankizivaviny?
40:25 Ho namanao horasarasaina, dia mpivarotra hizara azy?
40:26 Azonao mameno harona tamin'ny Hanafina, ary aoka ny lohany ho ampiasaina ho toy ny trano ho an'ny hazandrano?
40:27 Mametraka ny tananao izy; tsarovy ny ady, ary hiteny intsony.
40:28 Indro, ho levona ny fanantenany azy, ary teo imason'ny rehetra, dia horavana.
41:1 Tsy hanaitra azy, tahaka ny lozabe hanao, fa iza moa no mahasakana ny tarehy?
41:2 Iza no nanome ahy mialoha, ka mba sahy hamaly azy? Ny zavatra rehetra izay ambanin'ny lanitra Ahy.
41:3 Aho, dia tsy hiantra azy, na ny mahery sy ny sandoka manandrana teny amin'ny fitalahoana.
41:4 Iza no afaka maneho ny hatsaran-tarehy ny akanjony? Ary iza no miditra ny afovoan'ny ny vavany?
41:5 Iza no hanokatra ny varavaran'ny tavany? Nomeko tahotra ny faribolana ny nify.
41:6 Ny tenany dia tahaka ny ampinga fused miara-, toy ny mikitroka kirany nanery ny hafa.
41:7 Ny iray miray amin'ny hafa, ary tsy mety na dia rivotra mandalo eo aminy.
41:8 Izy ireo manaraka ny iray hafa, ary mihazona ny tenany amin'ny toerana ka tsy hisaraka.
41:9 Ny sneezing manana ny famirapiratana ny afo, ary ny masony dia tahaka ny hodimason'ny maraina.
41:10 Jiro no mivoaka avy amin'ny vavany, toy ny fanilo ny afo hiredareda.
41:11 Mandalo setroka avy teo am-bavorony, tahaka ny vilany izay mafana sy mangotraka.
41:12 Ny fofonainy mahatonga arintany handoro, ary misy lelafo mivoaka avy amin'ny vavany.
41:13 Hery mitoetra ao amin'ny vozony, ary fahoriana mandeha eo anatrehany.
41:14 Ny faritra ny tenany miara-miasa amin'ny firindrana. Dia Izy no haniraka tselatra bolts azy, ary dia tsy ho entina ho any amin'ny toeran-kafa.
41:15 Ny fo dia ho tahaka ny mafy toy ny vato, ary toy ny matevina toy ny mpanefy vy ny riandriana.
41:16 Rehefa hatsangana, ny anjely dia hatahotra, ary, satria tora-kovitra, dia hanadio ny tenany.
41:17 Raha misy sabatra mahazo niakatra taminy, dia tsy ho afaka nanorim-ponenana tany, na lefona, na ny saron-tratra.
41:18 Fa Izy no mandinika vy toy ny hoe akofa, ary varahina toy ny hoe hazo lo.
41:19 Ary ny mpandefa zana-tsipìka dia tsy hahatonga azy handositra; ny vato ao amin'ny foitran'antsamotady no nivadika ho vodivary ho solon'ny azy.
41:20 Izy no hitondra tantanana toy ny hoe vodivary, dia maneso ireo izay misy maneho ny lefona.
41:21 Ary ny rairainy ny masoandro dia ho ao ambaniny, dia hizara volamena ho azy ireo toy ny hoe tanimanga.
41:22 Izy no hanao ny halalin 'ny ranomasina ho tahaka ny vilany mahandro, ary hamboleko izany ny fefy toy ny menaka aza.
41:23 Ny lalana dia hamirapiratra nanaraka azy; dia hihevitra ny lavaka tsy hita noanoa toy ny hoe dia nampiraviravy amin'ny taona.
41:24 Tsy misy fahefana eto an-tany izay ny fampitahana ny azy, izay natao mba matahotra tsy misy.
41:25 Hitany ny zavatra malaza rehetra; izy no mpanjakan'ny rehetra ny zanaky ny fieboeboana.
42:1 dia Job, namaly ny Tompo, nanao hoe::
42:2 Fantatro fa afaka manao ny zava-drehetra, ary fa tsy misy hevitra miafina aminao.
42:3 Noho izany, iza moa no mety Hody olon-kafa ny tsy fahalalana toy ny torohevitra? Noho izany, Efa niteny adaladala, momba ny zavatra izay mihoatra noho ny fahalalana fepetra.
42:4 Henoy, fa hiteny aho. Dia hanontany anao, ary mba valio aho.
42:5 By mandinika miaraka ny sofina, Efa reko izany, Fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao.
42:6 Noho izany, Hitako ny tenako meloka, ary Izaho manao asa fivalozana eo amin'ny vainafo sy ny lavenona.
42:7 Fa Jesosy Tompo, rehefa nitsaha-niteny ireo teny ireo tamin'i Joba, dia hoy izy tamin'i Elifaza Themanite: Ny fahatezerako dia hirehitra aminareo, ary hamely ny sakaizanao roa lahy ny, satria tsy miteny tsara eo imasoko, toy ny an'i Joba mpanompoko no nanao.
42:8 Noho izany, dia vantotr'ombilahy fito sy ondrilahy fito ho anareo nitondra, ary mankanesa ao amin'i Joba mpanompoko, ka atero ho fanatitra dorana izany ho ho anareo. Fa koa, Joba mpanompoko hivavaka ho anareo; Dia manaiky ny tavany, ka hadalana tsy ho isaina ho anao. Fa ianareo tsy mbola niresaka tsara momba ahy, toy ny an'i Joba mpanompoko no nanao.
42:9 Dia nandeha Elifaza Themanite, sy Bildada Suhite, ary Zofara Namatita lasa, ary dia nanao araka izay efa nolazain'i Jehovah taminy, ary ny Tompo nanaiky ny tavan'ny Joba.
42:10 Toy izany koa, ny Tompo dia nifindra ny fibebahana Joba, raha nivavaka ho an'ny sakaizany. Ary ny Tompo nanolotra an'i indroa toraka izay nananany fahiny Izy.
42:11 Kanefa ny rahalahiny rehetra nanatona Azy, sy ny anabaviny rehetra, ary izay rehetra efa nahalala azy eo anatrehan'i, ary nihinan-kanina niaraka taminy tao an-tranony. Izy ireo ihany koa ny lohany nihorohoro ny azy sy nampionona azy, noho ny zava-dratsy rehetra izay efa nampiharina taminy. Ary samy nanome azy ondry vehivavy iray, ary ny kavim-bolamena iray.
42:12 Ary Jehovah nitahy ny niafaran'i Joba mihoatra noho ny voalohany. Ary izy nanana ondry aman'osy efatra arivo amby, ary ny enina arivo rameva, ary ny arivo tsiroaroa ny omby, ary ny arivo izy-boriky.
42:13 Ary nanan-janaka fito lahy sy vavy telo.
42:14 Ary niantso ny anaran'ny iray, Ora, ary ny anaran'ny faharoa, kanelina, ary ny anaran'ny fahatelo, Horn ny Cosmetics.
42:15 Ary, amin'izao tontolo izao, nisy tsy hita ny vehivavy tsara tarehy tahaka ny zanakavavin'i Joba. Ary dia nomen-drainy lova niaraka tamin'ny rahalahiny.
42:16 Fa Joba velona ela rehefa afaka izany fisehoan-javatra, Fa efa-polo amby zato taona, ary nahita ny zanany, sy ny zanaky ny zanany, ny lalana rehetra hatramin'ny zafindohalika, dia maty izy ny antitra sy feno andro.